extraversion ၏သဘောသဘာဝတွင် - dopamine-facilitated effective, cognitive and motor လုပ်ငန်းစဉ်များ၏အခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်သောဆက်နွယ်မှုများပြောင်းလဲခြင်း (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn On
dopamine-facilitated ထိခိုက်စေ၏ conditional Contextual activation အတွက်အပြောင်းအလဲ, သိမြင်မှုနှင့်မော်တာဖြစ်စဉ်များ (2013): extraversion ၏သဘောသဘာဝတွင်
ရစ်ချတ်အေ Depue* နှင့် ယုဖူ
လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေး, ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်, Ithaca, နယူးယော့, အမေရိကန်နိုင်ငံ
သုတေသန extraversion နှင့် dopamine (DA) လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ထောက်ခံပါတယ်။ DA မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအခင်းအကျင်း၏အေးစက်နှင့်မက်လုံးပေး encoding ကစီစဉ်ပေးထားတယ်။ မော်တာအလျင်, အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေနှင့် visuospatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်: ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ extraversion DA အပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြောင်းသုံးခုဖြစ်စဉ်များ၏ conditional Contextual ပံ့ပိုးလေးလည်း၏ထိရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိအကဲဖြတ်။ ကျနော်တို့အတူတူဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာသုံးနေတဲ့အထူးသဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေတွင် (တွဲအုပ်စုတစု) နဲ့မူးယစ်ဆုလာဘ် (methylphenidate, MP) အသင်းအဖွဲ့များ၏ရက်, အေးစက်တစ်စမ်းသပ်မှုနေ့, မျိုးသုဉ်း၏သုံးရက်မှ extraverts မြင့်အနိမ့်ထိတွေ့။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတစ်စုနှင့် (တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေတွင်အမတ်ခဲ့) တစ်ခု Unpaired အုပ်စုတစ်စုထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အေးစက် Contextual ပံ့ပိုးကူညီ (ဈ) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေတွင်နှင့်မွေးရာပါမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကို၎င်းတို့၏တွဲဖက်မှုအတွက်ကွဲပြားကြောင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများတင်ဆက်ထားပါတယ်နှင့် (ii) အထက်သုံးဖြစ်စဉ်များအပေါ်နေ့ကစုံစမ်းမှတစ်နေ့လျှင် 1 ကနေတိုးတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များ conditional Contextual မြင့် extraverts တွဲအတွက်မူးယစ်ဆေးများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေတွင်နှင့်အတူတွဲခဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးကိုအစီအမံကိုဖြတ်ပြီးပံ့ပိုးကူညီပေမယ့်အနိမ့် extraverts တွဲ (မထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်ခုခုအတွက်) တွင်အဘယ်သူမျှမအေးစက်၏ဝယ်ယူပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါချိတ်တွဲထားမွငျ့မား extraverts အတွက်တိုးမြှင့်သုံးယောက်အစီအမံကိုဖြတ်ပြီးဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင်အေးစက်ပံ့ပိုးအမတ်များ၏ခြွင်းချက်မရှိသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းရှိနေသော်လည်း extraverts တွဲမြင့်မားတဲ့အတွက်မျိုးသုဉ်း၏ပထမနေ့၌ထင်ရှားခဲ့သည်။ မျိုးသုဉ်း၏နောက်ဆုံးနေ့, နေ့ 1 အဆင့်ဆင့်မှပြန်လာသောတုံ့ပြန်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက် extraversion ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအခင်းအကျင်း၏ဝယ်ယူအတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ဒီအပြောင်းအလဲ conditional အခင်းအကျင်း၏ကွန်ရက်အနံအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် extraversion အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေခြင်းငှါ ထိန်းသိမ်းထား ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းမက်လုံးပေးအခင်းအကျင်း၏ differential encoded အလယ်ပိုင်းကိုယ်စားပြု၏ activation ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Extraversion သည် Eysenck နှင့် Gray's model များအပါအ ၀ င်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံစနစ်အားလုံးနီးပါးတွင်ဖော်ထုတ်ထားသောပိုမိုမြင့်မားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်လက္ခဏာကိုကိုယ်စားပြုသည် (မီးခိုးရောင်, 1994), အငါးခု-Factor မော်ဒယ် (ကော်စတာနှင့် McCrae, 1992), Tellegen ၏ Multidimensional Personality Questionnaire (MPQ) ပုံစံ (Tellegen နှင့် Waller, 2008) နှင့် Zuckerman ၏ Alternative Five-Factor Model (Zuckerman, 2002) ။ extraversion ၏ phenomenology ဤမော်ဒယ်များအားလုံးအတွက်အလားတူဖော်ပြထားသည်, အကျိုးသက်ရောက်စေအပြုသဘောတစ်ပြည်နယ် connote ကြောင်း adjective နာမဝိသေသနနှင့်အလိုဆန္ဒနှင့်အလို၏အားကြီးသောလှုံ့ဆျောမှုတို့ကအဖြစ်, စိတ်လှုပ်ရှားစိတ်အားထက်သန်တက်ကြွတဲ့, peppy, ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ခြင်း၏ခံစားချက်များကိုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည် (ယုံကြည်မှုနှင့်အကောင်းမြင်Watson နဲ့ Tellegen, 1985; Berridge, 2004).
Jung (1921) ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကဤအပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ခွန်အားနိုးမှုအခြေအနေကိုပိုလွန်ကဲသောဖော်ပြချက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူက extraversion အခြားသူများအားဖြင့်အလေးပေးပြောကြားသည်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်ပြည်နယ်ကထောက်ခံသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျယ်ပြန့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ Jung ၏အယူအဆကအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုရရှိစေသည့်ကျယ်ပြန့်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများရှိသည်ဟုဖော်ပြသည် မီးခိုးရောင် (1994) ယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုလူတန်းစားဆုလာဘ်များရေးစပ်ကြောင်းငြင်းခုံကအယူအဆတိုးချဲ့။ ထို့ကြောင့် extraversion သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုလာဘ်သူတို့အားဆုလာဘ်ရယူတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုထုတ်ယူသောအတိုင်းအတာအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
တိရစ္ဆာန်စာပေထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြောင့်သဘောတရားအလားတူဖြစ်စဉ် features တွေလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ (ဒီအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေသညျလူသားတို့အတွက်ပြည်နယ်နှင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများအကြားတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဆွဲငင်Depue နှင့် Collins, 1999; Depue နှင့် Morrone-Strupinsky, 2005; Depue နှင့်ဖူ, 2012) ။ မက်လုံးပေးအားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများမှာဖော်ထုတ်နေတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်အားကိုယ်စားပြုသည်နှင့်ရှေ့ကိုစက်ခေါင်းများနှင့်ဆုလာဘ်၏အားကြီးသောပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်တွေကိုသွေးဆောင်ကြောင့်ခြွင်းချက်မရှိနှင့်အခြေအနေများကိုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများကျယ်ပြန့်နှိုးဆွလူတန်းစားအားဖြင့်ရူးနှမ်းနေသည်။ ဒါကနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် extraversion တစ်ခုမက်လုံးပေးဆုလာဘ်စနစ်၏ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုကိုယ်စားပြုမယ်ဆိုရင်ဒီလှုံ့ဆျောမှုအတွက် mesocorticolimbic dopamine (DA) ပရောဂျက်စနစ်၏လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်သည်အတိုင်း, ထို့နောက်ရို, သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကြောင်းအကြံပြုသည်။ ဤစီမံကိန်းစနစ်၏အဓိက midbrain ၏ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင်အစပြုလျက်, ventral striatum နှင့် amygdala ၌၎င်း, Orbital cortex အပါအဝင်အများအပြား cortical ဒေသများ, ရန်နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်အများအပြား limbic ဒေသများ, (NAc) မှ afferents ပို့ပေး (Depue နှင့် Collins, 1999; Depue နှင့် Morrone-Strupinsky, 2005; လယ်ကွင်းများ et al ။ , 2007).
ကြွက်များနှင့်မျောက်များမှာ VTA-NAc လမ်းကြောင်းထဲမှာထိုး-မှီခို DA အဲဒီ receptor activation စိတ်ကြွဆေး၏စူးရှသောအကြိုးသက်ရောက်မှု mediates နှင့်အသစ်အဆန်းနှင့်အစားအစာမှ locomotor လှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်; အဖြစ်, ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးရန်လို, Affiliate နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (Depue နှင့် Collins, 1999; Berridge, 2007) ။ မျောက်တွေကို Single-ယူနစ်မှတ်တမ်းတင်လေ့လာမှုများမှာတော့ VTA DA အာရုံခံ၏ကြီးမားသောလူဦးရေ (စာစားချင်စိတ်ကိုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဦးစား activated နေကြတယ်Schultz et al ။ , 1995, 1997; Mirenowicz နှင့် Schultz, 1996; D'Ardenne et al ။ , 2008; Schroeder et al ။ , 2008), နှင့် DA ဆဲလ်တွေအများစု NUMERIC အဆိုပါ VTA အတွက်အခြေအနေများနှင့်ခြွင်းချက်မရှိနှစ်ဦးစလုံးမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပြင်းအားမှအချိုးအစားအတွက်ကိုတုံ့ပြန် (လယ်ကွင်းများ et al ။ , 2007; Schultz, 2007; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010) ။ အလားတူပင် NAc ဆဲလ်ကြားကာလအတွင်းမှာဆုလာဘ်များနှင့်အသစ်အဆန်း၏မူလတန်းနှင့် conditional အချက်ပြမှုများကိုဆုလာဘ်မျှော်လင့်ထားသည့်အခါနှင့်အကြိုးလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကာလအတွင်းမှပစ်ခတ်တိုးမြှင့်။
လူသားမြားသညျတှငျ, မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအပြုသဘောနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်နေသည် စိတ်ခံစားမှု ထိုကဲ့သို့သောဘုန်းကြီးနှင့် Euphoria ပီတိအဖြစ်ခံစားခကျြမြားနှငျ့ စိတ်ခွန်အားနိုး အလိုဆန္ဒ, ချို့တဲ့, တဏှာ, အာနိသင်နှင့် Self-ထိရောက်မှု၏ခံစားချက်များကို (Depue နှင့် Collins, 1999) ။ ဒါဟာအပြုသဘောဆန္ဒပြည့်၏ခံစားချက်များကိုနှင့်ဆက်နွယ်သောဆုလာဘ်ကုအတူလိုက်ပါကြောင်းခံစားချက်များကို, quiescence, like နှိပ်ခြင်း, အေးဆေးတည်ငြိမ်အပျော်အပါး (မတူဘဲ၌တည်ရှိ၏Depue နှင့် Morrone-Strupinsky, 2005; Smillie et al ။ , 2012) ။ DA လှုပ်ရှားမှုသည်ယခင်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် neuroimaging လေ့လာမှုများစူးရှသောကိုကင်းသို့မဟုတ်အမ်ဖီတမင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကာလအတွင်းပါဝင်သူတစ် ဦး ၏ပုဂ္ဂလဒိive္ပီတိစိတ်ရှုပ်မှု၏ပြင်းထန်မှုသည် DA-agonist နှင့်အချိုးအစားအရ ventral တွင် DA စားသုံးသူတင်ပို့သူနှင့်စည်းနှောင်ထားသောတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိရ striatum (Volkow et al ။ , 1997) ။ ထို့အပြင် NAc အတွက် DA-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှု (Euphoria ပီတိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအဖြစ်, အလိုဆန္ဒ, ချို့တဲ့ခြင်း, တဏှာ၏စိတ်ခွန်အားနိုးခံစားခကျြညီတူညီမျှပြင်းပြင်းထန်ထန် (မပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လျှင်) နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Breiter et al ။ , 1997) ။ ထိုအ fMRI နှင့်ပေအားဖြင့်အကဲဖြတ်ဆုလာဘ် circuitry (ဥပမာ amygdala, medial orbitofrontal cortex နှင့် anterior cingulate cortex) ၏ကျန်းမာလူ့ ventral striatum နှင့်အခြားဒေသများအတွက်အပြုသဘောသို့မဟုတ်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activation ၏ဒီဂရီသို့မဟုတ် agonist-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် Euphoria ပီတိ (ဈ) ခံစားချက်များကို, (ii) အသစ်အဆန်းရှာခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ Impulse ၏ extraversion နှင့်အလားတူစရိုက်များ, (iii) DA-သက်ဆိုင်ရာဗီဇ polymorphic နှင့် (ဃ) DA ၏ pharmacological ညွှန်းကိန်း (functioningDepue et al ။ , 1994; Depue, 1995; Berke နှင့် Hyman, 2000; Drevets, 2001; Canli et al ။ , 2002; Kumari et al ။ , 2004; Knutson နှင့် Cooper က, 2005; Mobbs et al ။ , 2005; Reuter နှင့် Hennig, 2005; Reuter et al ။ , 2006; Deckersbach et al ။ , 2006; D'Ardenne et al ။ , 2008; Zald et al ။ , 2008; Smillie et al ။ , 2009; Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010; Buckholtz et al ။ , 2010; Haber နှင့် Knutson, 2010; Baik et al ။ , 2012) ။ ထို့ကွောငျ့အအတူတကွယူ, တိရစ္ဆာန်နှင့်လူ့သက်သေအထောက်အထားကို (VTA DA-NAc လမ်းကြောင်းမက်လုံးပေးဆုလာဘ်တစ်ခုမူလတန်းအာရုံကြောဆားကစ်ကြောင်းအယူအဆထောက်ခံပါသည်Bromberg-မာတင် et al ။ , 2010; Haber နှင့် Knutson, 2010; Sesack နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2010), နှင့် extraversion ကြောင်းလမ်းကြောင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ် (Wacker et al ။ , 2006, 2012, 2013).
VTA DA activation NAc အတွက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု inducing ဘို့အရေးကြီးသည်နေစဉ်, VTA DA အာရုံခံဆဲလျတုံ့ပြန်မှုကိုလည်း (ထိုဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသောသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာအေးစက်လှုံ့ဆော်မှု) နှင့်ဆုလာဘ်ရရှိသွားကြောင်းလှုံ့ဆော်အပြုအမူဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်အခန်းကဏ္ဍSchultz et al ။ , 1997; ဂူ et al ။ , 2004; Schultz, 2007) ။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူ, exogenous ဆုလာဘ်မပါဘဲမျှသာ DA အာရုံခံဆဲလျ activation phasic DA ပစ်ခတ်ရန်နှင့်အတူတွဲဆက်စပ်များအတွက်ဦးစားပေးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Concordantly, DA အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်တဖြည်းဖြည်းအချိန်သော့ခတ် sucrose ပေးပို့ဟောကိန်းထုတ်တဲ့အေးစက် cue ၏တင်ဆက်မှုငှါ၎င်း, cue ဆီသို့ conditional ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်း phasic DA လွှတ်ပေးရေး (ခဲ့သည်Stuber et al ။ , 2008) ။ ဤသည်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအောက်ပါအဆင့်တွေကိုပါဝင်သည်။ VTA DA အာရုံခံသက်ဝင်များအတွက်အကောင်းဆုံးလှုံ့ဆော်မှုများမှာ ခန့်မှန်းရခက် ခြွင်းချက်မရှိဆုလာဘ် (ဥပမာ, အစားအစာ, ချိုမြိန်အရည်) ။ ထိုသို့သောဇီဝအဓိကလှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါ basolateral amygdala (BLA) တွင်သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအရေးပါမှုအဘို့အအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် Orbital တိုကျရိုကျ cortex (mOFC) medial နေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုလုံလောက်သောမက်လုံးပေး salience ရှိပါကဤနှင့်အခြား corticolimbic ဒေသများထို့နောက် (VTA DA အာရုံခံကိုသက်ဝင်Berke နှင့် Hyman, 2000; Myer-Lindenberg et al ။ , 2005; လယ်ကွင်းများ et al ။ , 2007; Kauer နှင့် Malenka, 2007; Stuber et al ။ , 2008; Zellner နှင့် Ranaldi, 2010), သောဆုလာဘ်ရရှိရန်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုတိုးပွားလာတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ် NAc သို့ DA လွှတ်လိုက်ပါ။ နောက်ပိုင်းတွင်, တသမတ်တည်းဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကြားနေတွေကိုပါ (BLA နှင့် mOFC အတွက် (CSS ဖြစ်လာ) ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်Elliott သည် et al ။ , 2003; Gottfried et al ။ , 2003; Simmons et al ။ , 2007; D'Ardenne et al ။ , 2008), အလှည့်အတွက်ကြိုတင်မူလတန်းဆုလာဘ်တွေရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုမှ VTA DA အာရုံခံကိုသက်ဝင်ရာ (Zellner နှင့် Ranaldi, 2010) ။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုပုံမှာပြသတာဖြစ်ပါတယ် 1 စမ်းသပ်မှုတစ်ခု၏တိုးတက်မှုကာလအတွင်း VTA DA အာရုံခံများကရလဒ်ကောင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများ၏ရှေ့မှောက်တွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းကျဆင်းခြင်းသည်ခြွင်းချက်မရှိသောဆုလာဘ်သို့ DA တုန့်ပြန်ခြင်းသည်အခြေအနေကိုအားပေးသည့်လှုံ့ဆော်မှုများသို့လုံးဝပြောင်းရွှေ့သည်အထိပြသသည် (Schultz et al ။ , 1997; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2005; နေ့ et al ။ , 2007; Schultz, 2007; Stuber et al ။ , 2008) ။ ဆုလာဘ်၏အစောပိုင်းနဲ့အစောပိုင်းခန့်မှန်းတုံ့ပြန်သကဲ့သို့ထို့ကြောင့် VTA DA ရိနာစွဲသောကာလ၌နောက်ပြန် ratchets ။ ထို့ကြောင့်, DA လှုပ်ရှားမှုဟာ NAc (အတွင်းတုံ့ပြန်မှု-ပံ့ပိုးယန္တရားရန်, VTA အာရုံခံကိုသက်ဝင်ရာဆုလာဘ်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှု, လင့်ထားသည်ရန်, Conditions မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု-အထူးသဖြင့်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုမှအရေးကြီးသည်Schultz et al ။ , 1997; Depue နှင့် Collins, 1999; Nestler, 2001; Depue နှင့် Morrone-Strupinsky, 2005; Berridge, 2007; Stuber et al ။ , 2008; Zellner နှင့် Ranaldi, 2010).
ပုံ 1 ။ ရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့ function ကိုအဖြစ်ဆွေမျိုး ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) dopamine (DA) ပစ်ခတ်ရန်။ DA တုံ့ပြန်သည်အထိ VTA DA အာရုံခံ, တသမတ်တည်းဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများရှိနေခြင်း, နှင့်ခြွင်းချက်မရှိဆုလာဘ်မှလှုပ်ရှားမှုထဲမှာတစ်ပြိုင်တည်းပါကျဆင်းခြင်းအတွက်တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုပွအေးစက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု (စမ်းသပ်မှု 1-5) အားလုံးဝလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါ NAc အတွက် DA ၏လွှတ်ပေးရန်အတွက်တဲ့အခါမှာ VTA DA activation ရလဒ်များကိုအကျိုးကို-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အာရုံကြောဖွဲ့စည်းမှု၏ဝယ်ယူတိုးမြှင့်ထားသည်။ အဆိုပါ NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တစ်ခုတည်း CS မက်လုံးပေး (ပြုပါထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်ထုံးစံ၌ဆုလာဘ်တွေရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းရှုပ်ထွေးဆက်စပ် ensembles ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍDepue နှင့် Morrone-Strupinsky, 2005; Depue နှင့်ဖူ, 2012) ။ မူလတန်းဆုလာဘ်တွေရဲ့ဖြစ်ပျက်မှု precedes သောအပြည့်အဝအခြေအနေတွင်ပါဝင်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှု၏ခင်းကျင်းခြင်း (NAc အပေါ်ဆုံO'Donnell, 1999) ။ ဤရွေ့ကား corticolimbic သွင်းအားစုအတွက် BLA, mOFC နှင့်တိုးချဲ့ amygdala (ဥပမာ, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ) အပါအဝင်များစွာသောသိမှုဆိုင်ရာအာရုံအပြောင်းအလဲနဲ့လမ်းကြောင်းကနေ, ဒါပေမယ့်အရေးကြီးတာကလည်းဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများမက်လုံးပေး salience တွက်ချက်သောသူတို့ကိုဒေသများကနေအစပြုတာ (Groenewegen et al ။ , 1999a,b; O'Donnell, 1999; Berke နှင့် Hyman, 2000; Depue နှင့် Morrone-Strupinsky, 2005) ။ ဒီချုံ့၏အဆုံးထုတ်ကုန်မက်လုံးပေး salience သို့မဟုတ်တန်ဖိုး encoded သော Contextual ensemble ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ensemble အဆိုပါ ensemble ဆုလာဘ်တစ်ခုမျှော်မှန်းရလဒ် (ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ပြင်းအားနှင့်ဆက်စပ်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း mOFC အတွက်အဆုံးသတ်သော cortico-cortical ကွင်းဆက်အတွက်နောက်ထပ်ချုံ့ဖြစ်၏ အလက်ဇန်းဒါး et al ။ , 1990; O'Donnell, 1999; Amodio နှင့် Frith, 2006) ။ ဒါဟာ (ဆုလာဘ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အခင်းအကျင်းပေါ်ပေါက်သည့်အခါက VTA DA အာရုံခံ၏ activation ၏အဓိကအရင်းအမြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း mOFC ကြောင်းထို့နောက်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးTaber et al ။ , 1995; Carr ကနှင့် Sesack, 2000; Zellner နှင့် Ranaldi, 2010) ။ အဆိုပါ mOFC Contextual ensemble ၏ကုဒ်သွင်းမက်လုံးပေး salience ၏ပြင်းအားအရှင် mOFC-VTA DA activation နှင့်အလှည့်၌, NAc DA-facilitated မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပြင်းအားသို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
Contextual ensembles များ၏ဝယ်ယူသည့် NAc အတွက် DA ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင် Corticolimbic ဒေသများ (ထို NAc မှ VTA DA စီမံကိန်းအနီးအနားက NAc အာရုံခံ innervateO'Donnell, 1999; Depue နှင့် Morrone-Strupinsky, 2005; Sesack နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2010) ။ ဒါဟာ (DA NAc အာရုံခံမှ corticolimbic afferents ၏ရေရှည် potentiated ဆက်သွယ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပါသည်Nestler, 2001; goto နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; Kauer နှင့် Malenka, 2007; Shen et al ။ , 2008; Stuber et al ။ , 2008) ။ ယူဆရသည် NAc အတွက်ဖြန့်ချိသောပိုပြီး DA, အရှင် facilitated afferents ၏နံပါတ် NAc အာရုံခံအပေါ် Contextual afferents များ၏ချိတ်ဆက်မှု၏ခိုင်မာ (က) သာ. ကွီးမွတျနှငျ့ (ခ) သာ. ။ ထို့ကွောငျ့ NAc မှ DA input ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲဟာ Contextual ensemble ၏ခွန်အား modulate နှင့်ဤအရပ်မှနောက်ပိုင်းတွင်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု, အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်ချဉ်းကပ်အပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာ extraverted အပြုအမူ) ထုတ်ယူနိုင်ရန်ကြောင်း ensemble များ၏စွမ်းရည်ပါလိမ့်မယ်.
ဤမော်ဒယ်၏အရေးပါမှုမှာ Extraversion ၌တွေ့ရှိသည့်အတိုင်းဆုချီးမြှင့်ရန် VTA DA-NAc တုံ့ပြန်မှုတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများသည်ကြားခံဆက်စပ်အခြေအနေများမှခြွင်းချက်မရှိဆုလာဘ်များအကြောင်းကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကွန်ယက်များ၏အားသာချက်နှင့်အနံကွဲပြားခြားနားမှုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ဆုလာဘ် - သက်ဆိုင်ရာအခင်းအကျင်း။ အတိအကျအားဖြင့်ဤခန့်မှန်းချက်ကိုတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင်အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ချိတ် et al ။ , 1992; Cabib, 1993; Jodogne et al ။ , 1994; Wassum et al ။ , 2011) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏ဆိုလိုသည့်အတွက်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍနိုင်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Contextual ကွန်ရက်များ၏အစွမ်းသတ္တိ, အနံအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ extraverted အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု၏။
အေးစက်နှင့် extraversion အပေါ်သေးငယ်တဲ့ပဏာမလေ့လာမှုကိုတိုးချဲ့ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအပြည့်အဝလေ့လာနေဤဖြစ်နိုင်ခြေစုံစမ်းစစ်ဆေး ရယူခြင်း နှင့် မျိုးသုဉ်း တစ်ဦး DA agonist (methylphenidate) တွင် DA-modulated မော်တာ, အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၏ conditional Contextual ပံ့ပိုးခုနစ်ယောက်ကျော်ရက်ဆက်တိုက် extraverts မြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်လူမျိုးကွဲအတွက်အခြေအနေတွင် -paired ။ ကျနော်တို့ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် methylphenidate နှင့်အတူတွဲအခြေအနေတွင်ရှိခဲ့သူကိုမြင့်မားသော extraverts extraverts အနိမ့်မှဆွေမျိုးအားလုံးသုံးဖြစ်စဉ်များကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာ သာ. ကွီးမွတျသောအခြေအနေများ Contextual ပံ့ပိုးကူညီပြသကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် extraverts အနိမ့်သောဤစမ်းသပ်အခြေအနေများအောက်တွင်အနည်းငယ်သာရှိလျှင်, အေးစက်ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပွငျအေးစက်နေတဲ့အေးစက်စမ်းသပ်ခြင်းနေ့၌သာစစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသရုပ်ပြ (က) ကြံ့ခိုင်ခြွင်းချက်မရှိမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏မရှိခြင်းအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအောက်မှာသုဉ်း၏ပထမနေ့၌တုံ့ပြန်မှုအေးစက်နှင့် (ခ) အခွအေနမြေား၏ယိုယွင်းနေတဲ့ကျော်တုံ့ပြန် သုံးရက်ကြာသုဉ်းကာလ။
သုံးနှစ်ဆက်တိုက်အဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦးကလေ့လာမှုဒီဇိုင်း (ပုံအသုံးပြုခဲ့သည် 2): (ဈ) အသင်း အမတ်သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (Lactose ကို) သုံးရက်ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေတွင်နှင့်ဆက်နွယ်သော (ရက် 1-3) ။ လွှတ်တော်အမတ်နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာမူးယစ်ဆေးနှင့် extraversion ရမှတ်ဖို့ကို double-မျက်စိကန်းသောတူညီတောင့အတွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ပဏာမလေ့လာမှုများ၏အခြေခံတွင်, သုံးအစည်းအရုံးရက်ပေါင်းကိုအသုံးပြုကြသည် ဟူ. ၎င်း, DA agonist ၏အနိမ့်ဆေးများနှင့်အတူပင်တနေ့ (မက်လုံးပေးဖြစ်စဉ်များမှ Contextual အသင်းအဖွဲ့များ၏ဝယ်ယူသရုပ်ပြကြွက်များတွင်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်Anagnostaras နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1996; Robinson နဲ့ Berridge, 2000); (ii) စမ်းသပ် တုံ့ပြန်၏ဆက်စပ်ပံ့ပိုးကူညီ၏ဒီဂရီအမတ်အခြေအနေများအောက်တွင်အကဲဖြတ်ထားတဲ့အတွက် (တစ်ရက် 4), နှင့် (iii) မျိုးသုဉ်း ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းနေ့က (နေ့က 5) အေးစက်အခြေအနေတွင်-facilitated ခြွင်းချက်မရှိမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏မရှိခြင်းအတွက်တုံ့ပြန်, Conditions တွေကို (တစ်စိတ်ခွန်အားနိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေးရာ၏ရှေ့မှောက်တွင်အကဲဖြတ်ရှိရာ (ရက် 7-5), ရလဒ်များအရအိပ်ယာ၏သုံးရက်,Anagnostaras နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1996; Everitt et al ။ , 2001).
ပုံ2။ လေ့လာမှုဒီဇိုင်းနှင့်စမ်းသပ်ဆဲအခြေအနေများ။ အသေးစိတ်ကိုစာသားကိုကြည့်ရှုပါ။ M က, methylphenidate; : P, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ။
သုံးစမ်းသပ်အခြေအနေများ, extraverts မြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်လူမျိုးကွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ (ဆိုလိုသည်မှာ, ခြောက်လအုပ်စုများစုစုပေါင်း), (ဓါတ်ခွဲခန်းအခြေအနေတွင်နှင့်အတူလွှတ်တော်အမတ်ထိတွေ့တွဲတွဲ) သို့မဟုတ်မ (မရခဲ့ဘူး နှင့် ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) ။ တစ်ဦးချင်းစီအသင်းမှနေ့ရက်တွင်, သုံးခုစလုံးစမ်းသပ်အခြေအနေများ Lab မှ (နှစ်ခုကိုဆက်စပ်အခြေအနေကွဲပြားဓါတ်ခွဲခန်း၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အမတ်သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာလက်ခံရရှိ A, Lab မှနောက်တွင် B) တာဝန်များကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်သည့်အခါသူတို့သည်လည်း Lab မှတစ်ဦးအတွက်ပြုသကဲ့သို့သင်တန်းသားများ, စမ်းသပ်နေဖြင့်ထောက်ပံ့စိတ်ခံစားမှုကြားနေမဂ္ဂဇင်းများကိုဖတ်ရှုရာနှစ်ဆပိုများလာ။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပုံကိုကြည့်ပါ (အမတ်ထိတွေ့မှုများအတွက်ပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းအခင်းအကျင်းအတွင်း pair နဲ့ Unpaired အခြေအနေများပမာဏမှာတူညီ 2()Anagnostaras နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1996) ။ (ယခင်သုတေသနအောက်ပါAnagnostaras နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1996; Robinson နဲ့ Berridge, 2000), Labs က A နှင့် B ၏ဆက်စပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာ, အခင်း, နံရံအရောင်အဆင်းနဲ့အလှဆင်, အလင်းရောင်, ပရိဘောဂများနှင့်စမ်းသပ်အတွက်ကွဲပြားပါတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အမတ်အပါအဝင် psychostimulants, ကြောင့်, ကျယ်ဝန်းလာစေ အဆိုပါ NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်မှတဆင့်အပြုအမူ၏အေးစက်-cue activation (ပါကင် et al ။ , 1999; Robinson နဲ့ Berridge, 2000; Everitt et al ။ , 2001), အားလုံးအခြေအနေများစမ်းသပ်ခြင်းနေ့၌အမတ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ conditional မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏စကားရပ်အခြေအနေတွင်-မှီခိုကြောင့်ပါလီမန်အမတ်, စမ်းသပ်ခြင်းနေ့၌အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, အမတ်ကိုလက်ခံရရှိရှိနေသော်လည်းအထက်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအေးစက်ပံ့ပိုးဝယ်ယူထားပြီးအုပ်စုသင့်အဖြစ်တုံ့ပြန်၏ပံ့ပိုးကူညီဖော်ပြသင့်ပါဘူး။ ဒီအရာ Contextual တွေကို Unpaired နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုများအတွက်အမတ်၏ခြွင်းချက်မရှိသက်ရောက်မှုမှတွဲဆက်ခြင်းအခွအေနေဆွေမျိုးထဲမှာမက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများကိုဝယ်ယူခဲ့ဖို့အတိုင်းအတာ၏စမ်းသပ်မှုနေ့ကတခုတခုအပေါ်မှာအကဲဖြတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ MPQ (Tellegen နှင့် Waller, 2008) extraversion စကေးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာ EPQ extraversion (0.62 နှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည် P <0.01), NEO-PI ဖြင့်တိုင်းတာသည့် extraversion ချိန်ခွင်၏အကြောင်းအရာပါဝင်သည် (ကော်စတာနှင့် McCrae, 1992; ဘုရားကျောင်း, 1994), (အားကြီးသောဗီဇမူကွဲကလွှမ်းမိုးနေသည်Tellegen et al ။ , 1988), နှင့်၎င်း၏အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအနက် (အကျိုးသက်ရောက်စေအပြုသဘော၏ပြည်နယ်အတိုင်းအတာမှ convergence-ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆက်ဆံရေးကထောက်ခံနေသည်Zevon နှင့် Tellegen, 1982; Watson နဲ့ Tellegen, 1985; Tellegen နှင့် Waller, 2008) ။ MPQ extraversion ရမှတ် (92% မှရရှိသောခဲ့ကြသည်N သည်အခြားတက္ကသိုလ်နမူနာရန်နှင့် 2997-19 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အပိုင်းအခြားအတွင်းအထွေထွေသောလူဦးရေနှင့်ညီမျှကာ MPQ ပရိုဖိုင်းရှိပါတယ်ပေးသောကော်နဲလ်ကပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေ၏ = 24), (Tellegen နှင့် Waller, 2008) ။ အမြင့်နှင့်အနိမ့ extraversion လူမျိုးကွဲကျပန်း MPQ extraversion ရမှတ်များ, အသီးသီးထိပ်နဲ့အောက်ဆုံး deciles ကနေရှေးခယျြခဲ့သညျ, ပြီးတော့ကျပန်းသုံးခုစမ်းသပ်အခြေအနေများတာဝန်ကျတယ်။ Selected သင်တန်းသားများကိုဆေးပညာအများနှင့်စိတ်ရောဂါပုံမှန်နှင့် SCID (Non-လူနာဗားရှင်း) ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို အသုံးပြု. (ဈ) ဆေးပညာဆိုင်ရာအင်တာဗျူးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲဖြေဆိုမယ့်ဆရာဝန်အသုံးပြုပုံနှင့် (ii) စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူးခြင်းဖြင့် MPQ ရမှတ်မှမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုမျက်စိကန်းသောအဖြစ်, အဘယ်သူမျှမဆေးယူပြီးခဲ့ကြ , DSM-IV စံ, နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Disorders စာမေးပွဲ (Loranger, 1994) ဝင်ရိုးတန်း II ကိုမမှန်ပါ။ ကျနော်တို့ (က) နှလုံးသွေးကြော, ကိုယ်ခံစွမ်းအားများသို့မဟုတ် endocrine မမှန်သို့မဟုတ်သောဤသူသို့မဟုတ်အမတ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်အံ့သောငှါအခြားအခြေအနေများများအတွက်ဆေးဝါးများယူပြီးခဲ့ကြသည်နှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုဖယ်ထုတ်လိုက်; (ခ) ဝင်ရိုးတန်းငါနှင့် II ကိုမမှန်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများခန့်မှန်းရခက်နည်းလမ်း DA လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါကြောင့်၎င်း, (ဂ) ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခို; နှင့် (ဃ) တစ်ဦး (နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်အတွင်း) မကြာသေးမီဆေးလိပ်သောက်သမိုင်း, နီကိုတင်း DA နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်ကတည်းက။ ကျနော်တို့ဆေးလိပ်သောက်၏ကြိမ်နှုန်းဟာ MPQ extraversion ပျမ်းမျှအထက်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကွာခြားပါဘူးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု detect လုပ်ဖို့, သင်တန်းသားများကိုကြိုတင်တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာမှုနေ့နေ့ကိုလျှို့ဝှက်မူးယစ်ဆေးမျက်နှာပြင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ 74 ပိုင်းတွင်ရှေးခယျြထားအထီးသင်တန်းသားများ၏, 70 (95%) ပါဝင်ခဲ့။ ကြောင့်တင်းကျပ် decile ရွေးချယ်ရေးစံဖို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, MPQ extraversion ရမှတ်များအားလုံး (အားလုံးအနိမ့်အဖွဲ့ခွဲပေါင်းစပ်၏နှိုင်းယှဉ်အကြားသိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူး P's <0.70) အားလုံးမြင့်မားသော subgroup ပေါင်းစပ် (အားလုံး) ၏နှိုင်းယှဉ်အကြား Pစမ်းသပ်အခြေအနေများ (ဇယား။ ) ကိုဖြတ်ပြီး 's <0.70) 1) ။ အဆိုပါ 70 သင်တန်းသားများကိုလည်း၎င်းတို့၏ MPQ အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု (Neuroticism) နှင့်ကန့်သတ် (Impulse စကေး) ရက်နေ့တွင်အလယ်ခြောက်လ deciles အတွင်းကျသွား၏အခြေခံပေါ်မှာရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, မြင့်အနိမ့် extraversion သင်တန်းသားများသည်ဤသည်အခြား MPQ စရိုက်များပေါ် (သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမဟုတ်) ညီမျှခဲ့ကြသည်။ အထီး (ကော့ကေးဆပ်; အသက်အရွယ်: 19-21 နှစ်ပေါင်း; အလေးချိန်: 62-88 ကီလိုဂရမ်) DA ထိရောက်မှုသိသိသာသာရာသီစက်ဝန်းတစ်ဝှမ်းကွဲပြားသောကြောင့်, အမျိုးသမီးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်ထက် (Depue et al ။ , 1994) ။ ခြောက်နိုင်ငံစမ်းသပ်အုပ်စုများ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်နံပါတ်တစ်ဖြစ်ပါသည်: အတူတွဲအမြင့် Extraversion: (PH ကို = 15); တွဲအနိမျ့ Extraversion: (PL = 15); Unpaired အမြင့် Extraversion: (UPH = 10); Unpaired အနိမျ့ Extraversion: (UPL = 10); ရလဒ်များအရအိပ်ယာအမြင့် Extraversion: (PBH = 10); ရလဒ်များအရအိပ်ယာအနိမျ့ Extraversion: (PBL = 10) ။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်အရေးပါနှိုင်းယှဉ်အနိမ့် extraversion တွဲတွဲမြင့်မားသော vs. ကြားသောကြောင့်, N သူတို့အားအုပ်စုနှစ်စုအဘို့အခြားအုပ်စုများသည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံးထံမှစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 1 ။ တစ်ဦးချင်းစီအခြေအနေနိမ့်နှင့်အမြင့်မားတဲ့ extraversion လူမျိုးကွဲများအတွက် MPQ Extraversion ရမှတ်များ.
(က) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားဖြင့် DA အဲဒီ receptor Subtype တွေရဲ့ array ကိုသက်ဝင်, presynaptic ဆိပ်ကမ်းကနေ DA ၏လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ယင်း၏ DA-agonist သက်ရောက်မှုပြုပြင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတ်အသုံးပြုခဲ့သည်; (ခ) ပါလီမန်အမတ် cortex နဲ့ striatum အတွက် presynaptic က်ဘ်ဆိုက်များမှာကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးအထူးသဖြင့် NAc ကဲ့သို့တူညီသော DA-လွှာမှသယ်ယူပို့ဆောင်အလားတူသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်ပြင်းအားနှင့်အတူချည်နှောင်; (ဂ) လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ binding ကင်းဖို့နီးပါးတူညီဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်အမတ်၏ဒေသဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူး; နှင့် (ဃ) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန် conditional ရာအရပျ preference ကို, မျောက်ဝံများအတွက် (ii) Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့် (iii) အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ, စွမ်းအင်, နှင့်ဆေးများမှာလူသားများတွင် Euphoria ပီတိအတွက် (ဈ) ဆုချီးဂုဏ်သတ္တိများအပါအဝင် NAc-facilitated မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ, induces ventral striatum အတွက် binding က၎င်း၏% DA-လွှာမှ (နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်း 0.5 mg / kg ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းVolkow et al ။ , 1995, 1997, 1998, 2001).
အမတ်လည်းဖြစ်သောကြောင့်ဤအရပ်၌အသုံးပြုသောဆေးများမှာ DA မှလုပ်ဆောင်ချက်က၎င်း၏တိကျတဲ့၏အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ limbic နှင့် coritical ဦးနှောက်ဒေသများမှာတော့ D1, D2, D3, D4 နှင့် D5 receptors (များ၏ကွဲပြားရောနှောရှိပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့, 1993) ။ ထိုအဦးနှောက်ဒေသများတွင် DA အားဖြင့်မော်တာ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်စဉ်များများ၏ထိန်းချုပ်မှု, ဒါကြောင့်, DA အဲဒီ receptor isoforms အမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်မှီခိုကြလိမ့်မည်။ D1 နှင့် D2 နှင့်အမတ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်အတွက် D1 / D2 ရောထွေး agonists နှင့်ရန်၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူလွှတ်တော်အမတ် (ကထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌နှစ်ဦးစလုံး D1 နှင့် D2 receptors မှတဆင့်၎င်း၏အပြုအမူသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်Koek နှင့် Colpaert, 1993; ထူးဆန်းတဲ့, 1993) ။ အရေးကြီးတာကတိုက်ရိုက် DA receptors ပတျသကျ, နှင့် CNS မှာရန်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူဒြပ်ပေါင်းများ (alpha 1 နှင့်2နှင့် beta ကို noradrenergic နှင့် 5HT2နှင့် 1A အဲဒီ receptor ရန်အပါအဝင်) DA ထက်အခြား receptors, ဖြစ်စေအမတ်အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘူး, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်၌လိမ်း ဒါကြောင့်သာအစွန်းရောက်အပြုအမူဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသည်ထိုကဲ့သို့သောမြင့်သောဆေးများမှာ (Koek နှင့် Colpaert, 1993) ။ ထို့အပြင် 5HT သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး affinitiy သာအများကြီးနိမ့်လွှတ်တော်အမတ်များအတွက်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းထက်မက, ဒါပေမယ့်လည်းဒီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆှဖှေဲ့ (အမတ်၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါRitz et al ။ , 1987; Little က et al ။ , 1993) ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသောပမာဏနည်းပါးသောကြောင့်အမတ်၏အဓိကသက်ရောက်မှုများမှာ D1 နှင့် D2 (နှင့်အခြား DA) receptor မိသားစုများအတွက်ဖြစ်သည်။ DA မက်လုံးပေးခြင်းလှုံ့ဆျောမှု၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်း, အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့် locomotion စတင်ခြင်းကတည်းကအနည်းဆုံး D1 နှင့် D2 receptors ပါ ၀ င်ပုံရသည် (Depue နှင့် Collins, 1999), အမတ် (bromocriptine သို့မဟုတ် bupropion ထက် extraversion ဖြစ်စဉ်များကိုလေ့လာရန်ပိုကောင်းတဲ့ agonist ဖြစ်ပါသည်Vassout et al ။ , 1993), အရာနှစ်ဦးစလုံးသည်အဓိကအားဖြင့် D2 အဲဒီ receptor သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အမတ်လည်း (noradrenergic နှင့် serotonergic ဆှဖှေဲ့မှဆွေမျိုးဆှဖှေဲ့ binding တစ်ဦးထက်ပိုတိကျတဲ့ DA ပို့ဆောင်ရေး, ရှိသည်ဖို့ပေါ်လာသောWeiner, 1972), စိတ်ကြွဆေးထက်နှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာကိုကင်းရန်။
အဆိုပါ DA-လွှာမှသယ်ယူပို့ဆောင်အမတ်များ၏ binding ရာခိုင်နှုန်းကိုတဦးတည်းအနေနဲ့ပါလီမန်အမတ်ထိုး၏ "ရွှဲ" သက်ရောက်မှုကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း, သွေးဆောင်အပြုသဘောနှင့်အတူသိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် (လူသားတွေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေVolkow et al ။ , 1997) ။ ကျနော်တို့ (~ 0.6 တစ်ဦးပါးစပ်အမတ်ထိုးဒီထိုးမှာ (က)% DA Transporter binding ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး / ကီလိုဂရမ် MG 80% သို့မဟုတ်ပိုအသုံးပြုသောVolkow et al ။ , 1998, 2001); (ခ) တစ်ဦးလုံလုံလောက်လောက်ရှည်လျားပြီးတည်ငြိမ်အထွတ်အထိပ်ကုန်းပြင်မြင့် (~ 90 မိ) (အမတ်၏အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေဆိုးကျိုးများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Volkow et al ။ , 1997, 1998), အထွတ်အထိပ်အမတ်ပြင်းအားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်အုပ်ချုပ်ရေး (~ 1 ဇ) များအတွက်လုံလောက်သောအချိန်ခွင့်ပြု; (ဂ) မျှသိသာအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်လေ့လာတွေ့ရှိရ၏ နှင့် (ဃ) ရှင်းလင်းရေး (လာမယ့်နေ့လက်ဆေးထွက်ညွှန်း, ~ 10 ဇဖြစ်ပါသည်Volkow et al ။ , 2001) ။ ထို့ပြင်လူသားများအတွက်အမတ် (0.5 mg / kg) ၏ binding နှင့်အချိန်-သင်တန်းဝိသေသလက္ခဏာများများအတွက်တည်ငြိမ်မှု retest အလွန်မြင့်မားသည် (Volkow et al ။ , 1995) ။ နှုတ်အနိမ့်ထိုး (0.5 mg / kg ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း) အတွက် acute အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါနောက်ဆုံးတွင်လူသားများအတွက်အမတ်တစ်ဦးအလွန်နိမ့်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုပရိုဖိုင်းရှိပါတယ် (Aoyama, 1994; ဝမ် et al ။ , 1994; Volkow et al ။ , 1995).
အရာအမတ်-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်တွဲဆက်ခြင်းအခွအေနအခြေအနေတွင်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်မှအတိုင်းအတာအားဖြင့်ရူးနှမ်းတုံ့ပြန်၏ပံ့ပိုးတွင်ထင်ဟပ်နေသည် ယေဘုယျ Contextual features တွေ Lab မှအေအထွေထွေအခြေအနေတွင်-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များ, အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုလိုပဲဆုလာဘ်နှင့်အတူရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, discrete လှုံ့ဆော်မှု၏တွဲဖက်မှု (ထက်ပိုပြီးအလွယ်တကူဝယ်ယူခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းရန် သာ. ကြီးမြတ်ခုခံနှင့်အတူကြောင်းတစ်သွယ်ဝိုက် Pavlovian လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်ဟော်လန်, 1992; Graybiel, 1998) ။ တိရစ္ဆာန်များအတွက် discrete လှုံ့ဆော်မှု vs ယေဘုယျအခြေအနေတွင်လိုအပ်သောအေးစက်အစည်းအဝေးများအရေအတွက် ~ 1 ဖြစ်ပါသည်: 20 session တစ်ခုအချိုးအသီးသီး။ အမတ်လုပ်ဖို့ Lab မှတစ်ဦး၏ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အေးစက်၏အောင်မြင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ကျနော်တို့ကသူတို့ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေတွင်နှင့်အတူ (ဈ) အသင်းအဖွဲ့, (ii) အမတ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများနှင့် (iii) မွေးရာပါမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကွဲပြားငါး 20-S ကဗီဒီယိုကလစ်များအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါးဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်းသားများများ၏ရှေ့မှောက်၌ 1 ခွကေိုတည်ရှိသော 56 လက်မတီဗီ Monitor ပေါ်မှာတစ် 12-မိကြွင်းသောအရာကြားကာလများကကွဲကွာ, ကျပန်းနိုင်ရန်အတွက် VCR မှတဆင့် Lab မှတစ်ဦးအတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်။
များ၏ content သုံး ဗီဒီယိုကလစ်များ၏, အစည်းအရုံးနေ့က 1 နှင့်စမ်းသပ်မှုနေ့က4အပေါ်ပြသ, စပိုင်းတွင်မက်လုံးပေး-ကြားနေခဲ့ကြပေမယ့် Lab ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုတစ်ဦးကစကားစပ်နှင့်အမတ်မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့အတွက်ကွဲပြား: (ဈ) စာကြည့်တိုက်Lab A နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုများမပါရှိသည့် Cornell ၏အဓိကစာကြည့်တိုက်၏ရှေ့တွင်ဒယ်အိုးတစ်ခု၊ (၂) Labfront: သူတို့ဓာတ်ခွဲခန်း၏ရှေ့ရင်ဆိုင်နေရထိုင်ခဲ့ကြသောကြောင့်, သင်တန်းသားများကိုအစဉ်မပြတ်လေ့လာမှုကာလအတွင်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော Lab မှတစ်ဦး၏အိမ်ရှေ့ကိုဖြတ်ပြီးတစ်ဦးရွေ့လျားသောဗီဒီယိုဒယ်အိုး; နှင့် (iii) ပုံတူ: အဆိုပါအဆုံးစွန်နှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုနှစ်ခုအခြားနည်းလမ်းကွဲပြား Lab မှအေ၏ရှေ့မှောက်၌အမျိုးသမီးပုံတူ၏ကြီးမားသောပိုစတာ: Labfront (ဈ) လျှင်မြန်စွာနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အေးစက်သောတစ်သွယ်ဝိုက်ယေဘုယျ Contextual လှုံ့ဆော်မှု, ကိုယ်စားပြုတယ်နှင့် (ii) ထိုသို့သောယေဘုယျ Contextual လှုံ့ဆော်မှုဖွယ်ရှိ (အရံရူပါရုံကိုမှတဆင့်ဆိုလိုသည်မှာ) ကို dorsal အမြင်အာရုံစီးအတွက်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ မတူတာကတော့, ပုံတူ (ဈ) တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပိုပြီးတဖြည်းဖြည်းအေးစက်နေသည်နှင့် (ii) ထိုသို့သော discrete လှုံ့ဆော်မှုဖွယ်ရှိ (ဆိုလိုသည်မှာ, အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ်) ကို ventral အမြင်အာရုံစီးအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ကြောင်းအနေနဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, discrete လှုံ့ဆော်မှုအရာဝတ္ထုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ differential စမ်းသပ်မှုနေ့က4အပေါ်တုံ့ပြန်တစ်ခုဝယ်ယူမက်လုံးပေး salience ၏တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ် facilitated Labfront နှင့် ပုံတူ နှင့်နှိုင်းယှဥ်လျှင် စာကြည့်တိုက်.
နှစ် အပိုဆောင်းယခင်ကအတည်ပြုဗီဒီယို (Morrone et al ။ , 2000; Morrone-Strupinsky နှင့် Depue, 2004), ထို့အပြင်အသင်းမှနေ့က 1 နှင့်စမ်းသပ်မှုနေ့က4အပေါ်ပြ, မူးယစျဆေးဆုလာဘ်သို့မဟုတ် Lab မှတစ်ဦးကတစ်ရက်5အပေါ် 1 မိနစ်ထိတွေ့မှု၏ (အပြင်ဘက်) ၏အထွေထွေအခြေအနေတွင်မအသင်းအဖွဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုကလစ်များ, သို့သော်, extraverts (ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတုံ့ပြန်ကြဘူးမှအရာ, အရာ extraverts ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်ဘဲအေးဆေးတည်ငြိမ်ပျြောမှေ့စခံစားချက်တွေကိုအတွက်တုံ့ပြန်ရန်, မွေးရာပါမက်လုံးပေးတန်ဖိုးနှင့်အစာစားချင်စိတ်ချဉ်းကပ်လှုံ့ဆျောမှုအတွက်ကွဲပြားMorrone et al ။ , 2000; Morrone-Strupinsky နှင့် Depue, 2004; Smillie et al ။ , 2012): (ဃ) မိုးသစ်တော (အနိမ့်မက်လုံးပေး): ကြားနေမိုးသစ်တောမြင်ကွင်းများနှင့် (v) ဘောလုံး (မြင့်သောမက်လုံးပေးခြင်းနှင့်ချဉ်းကပ်လှုံ့ဆျောမှုထက်တစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်ပျြောမှေ့စစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်: တစ်အောင်ပွဲခံဘောလုံးဂိမ်း sequence ကို (က touchdown ၏အမှတ်ပေး) ။ အဲဒီနှစျခုကလစ်ပ်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တစ်ဦးကစကားစပ် Lab မှတစ်ဦးနှင့်အတူသို့မဟုတ်အမတ်နှင့်အတူတွဲမခံခဲ့ရကြောင်းကျွမ်းတဝင်မရှိသောလှုံ့ဆော်မှုအပေါ် facilitatory သက်ရောက်မှုဝယ်ယူခဲ့ Lab မှရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းအဆိုပါမက်လုံးပေးတုံ့ပြန်မှုဆက်စပ်၏အခြေအနေမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု (၏မွေးရာပါမက်လုံးပေးတန်ဖိုးပူးတွဲ function ကိုဖြစ်ပါတယ်Jodogne et al ။ , 1994; Schultz et al ။ , 1997; Robinson နဲ့ Berridge, 2000) ။ နည်းနည်းမွေးရာပါမက်လုံးပေးတန်ဖိုးလှုံ့ဆော်မှုကဲ့သို့ မိုးသစ်တောတစ်အေးစက်အခြေအနေတွင်အားဖြင့်သိသိသာသာ facilitated မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါရန်မက်လုံးပေးတုံ့ပြန်မှုနေစဉ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ယင်းမှဆွေမျိုးကလစ် မိုးသစ်တော ကလစ်ကြောင်းမက်လုံးပေးတုံ့ပြန်မှုနေ့က 1 မှဆွေမျိုးနေ့က4တခုတခုအပေါ်မှာတိုးမြှင့်အထောက်အထားမည်လော, သဘာဝကျကျနေ့က 1 အပေါ်ကွာခြားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သောကျွမ်းတဝင်မရှိသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု၏သဘာဝမက်လုံးပေးတန်ဖိုးအပြန်အလှန်ထဲမှာအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏အောင်မြင်မှုကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်, တစ်ခုတိုးမြှင်မက်လုံးပေးတုံ့ပြန်မှုရှိလျှင် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ တစ်ရက်4နေ့က 1 မှဆွေမျိုး, ဒါပေမယ့်အဘို့အဘယ်သူမျှမတိုးမြှင့်အပေါ် မိုးသစ်တောထို့နောက်တတိုးမြှင့်တုန့်ပြန်မှကောက်ချက်ချစေခြင်းငှါ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နေ့၌4(Contextual အေးစက်အပေါ်မှီခိုခဲ့Robinson နဲ့ Berridge, 2000).
ပဏာမသုတေသနကြောင်းပြသ စာကြည့်တိုက်, မုတ်သုံသစ်တော, Labfrontနှင့် ပုံတူ အစပိုင်းတွင် [ထိခိုက်စေပြည်နယ်ထဲမှာကြားနေအဖြစ် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောကဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့အကြေးခွံကိုထိခိုက်နှစ်ဦးစလုံး 10-point အပေါ် rated ခဲ့ကြသည်N = 50 ကောလိပ်အထီး; Positve နည်းလမ် 1.1 သို့မဟုတ် 0.05 တစ် rating = ကြားနေပြည်နယ်ကိုထိခိုက်ဘယ်မှာအသီးသီး (SDs) = 1.01 (0.03), 1.08 (0.04), 2.03 (0.07), 1 (2),] အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ 4.1 = ပျော့အပြုသဘောပြည်နယ်အကျိုးသက်ရောက်စေရှိရာ, 1.2 (4) rated ခဲ့သည်။ 1 န်းကျင်ယေဘုယျအား ရှိ. , 2.2 (ကြားနေပြည်နယ်အကျိုးသက်ရောက်စေ) ထက်မပိုခဲ့ပါဘူး ratings အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ဆိုလို။
သာ Lab မှတစ်ဦးအတွက်တိုင်းတာသုံး variable တွေကို, မော်တာ, အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များအပေါ်အေးစက်အခြေအနေတွင်ပံ့ပိုးရည်ညွှန်း။ အားလုံးသုံး variable တွေကိုပု NAc သို့မဟုတ် dorsolateral prefrontal cortex (အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ် variable ကို) မှ VTA DA စီမံချက်များအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါသုံး variable တွေကိုထိခိုက်စေခြင်းနှင့်မော်တာ variable တွေကိုဗီဒီယိုကလစ်ပ်၏တစ်ဦးချင်းစီအပြီး (ထိုအမိန့်တွင်) တိုင်းတာခံရအတူအလွန်အကျွံတာဝန်အထပ်ထပ်ရှောင်ရှားရန်သာအစည်းအရုံးနေ့က 1 ပေါ်နှင့်စမ်းသပ်နေ့က4အပေါ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ချက်ချင်းဗီဒီယိုကလစ်တင်ပြချက်များအပြီးတွင်ဤနှစ်ရက်သာတခါတိုင်းတာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Extinction အဆင့်စဉ်အတွင်း, ဗီဒီယိုကလစ်ပ်သာမော်တာများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေတုံ့ပြန်မှုကိုပထမဦးဆုံး (နေ့က 5) On-တိုင်းတာခဲ့ကြသည်နှင့်အမျိုးသုဉ်း၏နောက်ဆုံး (နေ့က 7) ရက်။ ကအထပ်ထပ်သက်ရောက်မှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါသိမြင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန် (Extinction အတွက်အကဲဖြတ်မခံခဲ့ရLuciana et al ။ , 1992).
အလျင် မော်တာအပြုအမူများ၏ NAc အတွက်အများစု DA အားဖြင့် facilitated မက်လုံးပေးဖြစ်စဉ်များမှ (ဈ) အထူးသဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ် (သည် Le Moal ရှိမုန်, 1991; Depue နှင့် Collins, 1999), (ii) မူးယစ်ဆက်စပ်အေးစက်တွေကိုအားဖြင့် activated (Hyman နှင့် Malenka, 2001) နှင့် (iii) ဆက်စပ်မှု (r = 0.68, P <0.01)% NA-uptake လူ့ NAc အတွက် binding နှင့်အတူ (Volkow et al ။ , 1998) ။ ထို့ကြောင့်, လက်ချောင်းစေးထွက်ရှိ၏အလျင်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့တိုင်းတာခဲ့သည် Volkow et al ။ (1998)။ နှိပ်လက်ညှိုးကိုဘုံဘိုင်တစ်ခုတည်းကိုသာလက်ညှိုးထိုး-လက်ကောက်ဝတ်လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသောကြောင့်6့လက်ပ်တော့အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်ထန်းကျိန်းဝပ်နှင့်အတူကြီးစိုးလက်ကို အသုံးပြု. များအတွက်လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာ space bar ကိုအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးဒုတိယဘုံဘိုင်အရေအတွက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်တုံ့ပြန်မှုအချိန် (RT ကို) တွင်အပြောင်းအလဲများအတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့, သာနောက်ဆုံးအ5s ကိုနှိပ်များ၏ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ပုတ်၏ 20 s ကိုသုံးပြီးအကြိုလေ့လာမှုများတစ်ဦးချင်းစီအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအများဆုံး (RTs များအတွက်5s ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်ပြီးနောက်) နှိပ်များ၏ကနဦး 1-s ကိုကာလ၌မှတ်သားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
positive (အပြုသဘောမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပြည်နယ်ထင်ဟပ်သောအကျိုးသက်ရောက်စေZevon နှင့် Tellegen, 1982; Watson နဲ့ Tellegen, 1985; Watson နဲ့ Clark က, 1997; Depue နှင့် Collins, 1999; Tellegen နှင့် Waller, 2008), (တခြားနေရာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားယခင်ကအတည်ပြုစကေးနဲ့ဆင်တူတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေးများကအကဲဖြတ်ခဲ့သည်Morrone et al ။ , 2000; Morrone-Strupinsky နှင့် Depue, 2004) ။ ဤသည်နှင့်အလားတူအကြေးခွံ (အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြည်တွင်းရေးတသမတ်တည်း, retest ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အချက်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းရှိWatson နဲ့ Tellegen, 1985; Watson ဟာ et al ။ , 1988; Krauss et al ။ , 1992) ။ သူတို့ကအစလူ့ ventral striatum အတွက်အထူး binding (ဈ)% DA-လွှာမှ (ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်Volkow et al ။ , 1997ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဗီဒီယိုကပစ္စည်းမှ), (ii) DA-agonist စိန်ခေါ်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှု (r = 0.57, P <0.01) (Depue et al ။ , 1994; Volkow et al ။ , 1997; Morrone et al ။ , 2000; Morrone-Strupinsky နှင့် Depue, 2004) နှင့် (iii) extraversion (r = 0.49, P <0.01) (Morrone et al ။ , 2000) ။ အမတ်-သွေးဆောင်အထွတ်အထိပ်အကြား Intraclass ဆက်စပ်မှု ratings ကိုထိခိုက်ဆိတ်ကွယ်ရာ2(ဖြစ်ပါတယ် 3-0.58 လအတွင်းရရှိသောP <0.05; N ထိပ်ကနေ MPQ extraversion အပေါ်အောက်ခြေ decile အထိ = 20,) ။ အနုတ်လက္ခဏာပြည်နယ်ကိုထိခိုက်မှာလည်းအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေကဲ့သို့တူညီသောအချိန်များတွင် rated, ဒါပေမယ့်ယခင် 1 မှ2ကနေနည်းနည်း (Non-သိသိသာသာ) အပြောင်းအလဲ (ကြားနေစိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်) ပြပြီး, အမတ်တို့ကမျှသိသာ activation ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, အနုတ်လက္ခဏာ ratings ထပ်မံဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်မဟုတ်။
အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြေးခွံကိုထိခိုက် 1 (ကြားနေပြည်နယ်အကျိုးသက်ရောက်စေ) မှ 10 အထိအမြင်အာရုံ Analog စအကြေးခွံဖြစ်ကြသည်။ point 10 အများဆုံးအလွန်အမင်းအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ်များ (ဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ကိုတွေ့ adjective နာမဝိသေသနအားဖြင့်ကျောက်ချရပ်နားခဲ့သည်Watson နဲ့ Tellegen, 1985) ။ အဆိုပါအပြုသဘောနာမဝိသေသနကျောက်ဆူးခဲ့ကြသည်: ခိုင်မာတဲ့, peppy, စိတ်လှုပ်ရှား, စိတ်အားထက်သန်, ဝမ်းမြောက်, တက်ကြွ (ဘယ်မှာအားလုံး adjective နာမဝိသေသနအတိုင်းအတာအပေါ်အမှတ် 10 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့ကြသည်) ။ သင်တန်းသားများကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကလစ်ဖို့စကေးအပေါ်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအပြုသဘောဆောင်တဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေးလက်ပ်တော့ Monitor ပေါ်မှာပြသခံခဲ့ရ, နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကွန်ပျူတာပေါ်မှာတိုက်ရိုက်လုပ်ခဲ့ကြသည်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ (ဗီဒီယိုကလစ်များအတွက်ပါဝင်သူပြင်ဆင်နေသည် Monitor ပေါ်မှာ (က) အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင် prompt ကို, (ခ) တွင်ဗီဒီယိုကလစ်, (ဂ) အပြုသဘောဆောင်သည့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (~3s) ကိုထိခိုက်စေ: အကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်မော်တာအတိုင်းအတာအဘို့, နှိုးဆွ-တုံ့ပြန်မှု sequence ကိုခဲ့သည် ဃ)6s ကိုနှိပ်ခြင်း, အရာ၏အချိန်ကိုက်ပထမဦးဆုံးထိပုတ်ပါနဲ့စတင်နှင့်လက်တော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အသံဖိုင်ရပ်နား-ဘီးပ်နှင့်အတူအဆုံးသတ်နှင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအကြား (င) 1-မိကြွင်းသောအရာကြားကာလ။ သင်တန်းသားများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် ကြိုတင် ထိုလက်ပ်တော့အပေါ်လေ့လာမှု, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှိပ်များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကြေးခွံရန်။
ဤသည်ကိုအတိုင်းအရှည် (Lab မှအေ၏အထွေထွေဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေတွင်အဆိုပါတာဝန်ကနေဆင်းသက်လာသောအခြေအနေများမက်လုံးပေးသက်ရောက်မှုထင်ဟပ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားLuciana et al ။ , 1992, 1998; Luciana နှင့် Collins, 1997), (prefrontal cortex dorsolateral မှ VTA DA စီမံချက်များအပေါ်မျောက်ဝံများနှင့်လူသားတွေအတွက်မှီခိုဖြစ်ပြီး, အမတ်တို့က facilitated ဖြစ်ပါတယ်Oades နှင့် Halliday, 1987; Luciana et al ။ , 1992, 1998; Luciana နှင့် Collins, 1997; Devilbiss နှင့် Berridge, 2008; McNab et al ။ , 2009; Aart et al ။ , 2011) ။ အတိုချုပ်, တစ်ခုချင်းစီစမ်းသပ်ကာလအတွင်းသင်တန်းသားများကို3s အတွက်ကွန်ပျူတာမော်နီတာပေါ်မှာအလယ်ပိုင်း fixation အမှတ် (ကအနက်ရောင် "+") ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။ ထို့နောက်တစ်ဦးအမြင်အာရုံ cue (အဖြူရောင်နောက်ခံဆန့်ကျင်နေတဲ့ blackened စက်ဝိုင်း) က Cue နှင့် fixation အမှတ်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်များအတွက် blackened ပေးသောအပြီး, (အရမ်းအတိုချုပ်တစ်ဦး saccadic မျက်စိလှုပ်ရှားမှုလုပ်) 360 ms များအတွက် 200 °လုံးပတ်အတွင်းရံရူပါရုံ၌ထငျရှားလေ , 0.5 s ကို၏ကြားကာလနှောင့်နှေး 4.0 ့, ဒါမှမဟုတ် 8.0 ့။ နှောင့်နှေးပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးအလင်းကလောင် (FTG Data Systems, Inc) နှင့်အတူ cue ၏မျက်နှာပြင်တည်နေရာညွှန်ပြ။ နှစ်ဆယ်လေးပါးစမ်းသပ်မှုတွေ (တစ်ဦးချင်းစီနှောင့်နှေးများအတွက် 8), တစ်ဦး 2-s ကိုကြားရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလအတူကျပန်းလက်ဆွဲနှောင့်နှေးကြားကာလနှင့်စမ်းသပ်မှုတွေကျော် randomized cue တည်နေရာနှင့်အတူ, ပြီးစီးခဲ့ခဲ့ကြသည်။ အမြင်အာရုံတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုနှောင့်နှေးလေး quadrant (8 စမ်းသပ်မှုတွေ) ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောနေရာများမှာကျပန်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။ မှတ်ဉာဏ်တိကျမှန်ကန်မှုအလုပ်လုပ်အလင်းကိုဘောပင်၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ပါဝင်သူများကညွှန်ပြအမှန်တကယ်ပစ်မှတ်အနေဖြင့်အမှန်တကယ်ပစ်မှတ်တည်နေရာနှင့်ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်သွေဖီကဖွဲ့စည်းတဲ့တြိဂံ၏ hypotenuse အသုံးပြုခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်ကွန်ပျူတာဖြစ်ခဲ့သည်။ RT ကိုလည်းကွန်ပျူတာကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ (Luciana et al ။ , 1992, 1998; Luciana နှင့် Collins, 1997), အမတ်အာရုံစူးစိုက်မှု, arousal, သိမှုဆိုင်ရာအာရုံနှင့်တစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထားအမြင်အာရုံရှာဖွေရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက် sensorimotor ဖြစ်စဉ်များအပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ (သို့သော်မပေးတိတိကျကျအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တာဝန်များကိုအတွက်)4(က) Non-mnemonic Spatial တည်နေရာတာဝန်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်တစ်နေ့လျှင် 16 အပေါ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အောင်းနေချိန်တုံ့ပြန်ရန်ရှိရာအဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်နှောင့်နှေးနှင့်အတူစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုစမ်းသပ်မှုတွေကွန်ပျူတာမှတျတမျးတငျထားကြသည် ဟူ. ၎င်း, နှင့် (ခ) (အသီးသီးထငျရှားပစ်မှတ်အက္ခရာများနှင့်မှားယွင်းစွာမှတ်သား Non-ပစ်မှတ်အက္ခရာများ,) ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ကော်မရှင်အမှားအယွင်းများအရေအတွက်စာရင်းပြုစုထားသောခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာ bi-အက္ခရာဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်။ ဤအအလုပ်များကိုအမိန့်ခဲ့သည်: Non-mnemonic Spatial တည်နေရာ, မှတ်ဉာဏ်တာဝန်, bi-အက္ခရာဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်အလုပ်လုပ်။ ဤရွေ့ကားတာဝန်များကိုအပေါငျးတို့သဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကြည့်ရှုထိခိုက်စေခြင်းနှင့်မော်တာ variable တွေကိုများအတွက်တုံ့ပြန်ခဲ့ချက်ချင်းအပြီးတစ်ရက် 1 နေ့4အပေါ်ပေးထားခဲ့ကြသည်။
သင်တန်းသားများကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းနှစ်ခု Pre-လေ့လာမှုလည်ပတ်မှုအတွင်းမှာ Labs က A နှင့် B မှ habituated ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုခုနစျယောရက်ဆက်တိုက်တစ်ချိန်ချိန်မွန်းတည့်ခြင်းနှင့်2ညနေအကြား6½ဇ protocol ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ လွှတ်တော်အမတ်နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့ Lab မှတစ်ဦးအတွက်ရေနှင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်နှင့်တာဝန်များကိုနှင့်အစီအမံ 1 ဇ Post-မူးယစ်ဆေးစားသုံးမိစတင်တစ်ဦး 1-ဇကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုကြိုတင်တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာမှုနေ့သန်းခေါင်ကနေအစာရှောင်ခြင်း, ကြိုတင်လေ့လာမှုနှင့်စဉ်အတွင်းသုံးရက်များအတွက်အနိမ့် monoamine အစားအစာအပေါ်ခဲ့ကြသည်။
အခြားသူများအကြံပြုထားသကဲ့သို့ (Anagnostaras နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1996; Volkow et al ။ , 1997, 1998; Robinson နဲ့ Berridge, 2000), အေးစက်၏ပြင်းအားသုံးခုမှီခို variable တွေကိုအပေါ်နေ့က 1 စုံစမ်းဖို့အစည်းအရုံးနေ့က4ထံမှ% အပြောင်းအလဲအဖြစ်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်: မော်တာအလျင် (လက်ညှိုးကိုနှိပ်), အပြုသဘော ratings နှင့် visuospatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ယင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ (PB) နှင့် Unpaired (UP) အခြေအနေများအတွင်းအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့ extrovert လူမျိုးကွဲအရေအတွက်ချိန်ညှိငါးဗီဒီယို (alpha မဆိုဘို့စမ်းသပ်နေ့က 1 မှတစ်နေ့လျှင် 1 ထံမှအစည်းအရုံးနေ့က4သို့မဟုတ်% အတွက်အပြောင်းအလဲအပေါ်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာခြားနားချက်ပြသ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏, P <0.005) ။ ထို့ကြောင့်ဒုတိယအချက်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်အတူ (4: subgroups: PBL, PBH, UPL, UPH) ×5(ဗီဒီယိုကလစ်များ) ANOVA သည်အဖွဲ့ငယ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်အဓိကသက်ရောက်မှုများမတွေ့ရပါ။F(3, 144) = 1.45, P = 0.36] သို့မဟုတ်ဗီဒီယို [F(4, 144) = 1.32, P = 0.39] အပေါ် မော်တာအလျင် တစ်ရက် 1 ပေါ်မှာ။ တစ်ဦးက4ဒုတိယအချက်ပေါ်တွင်အထပ်ထပ်အစီအမံတွေနဲ့5× (လူမျိုးကွဲ) (ဗီဒီယို) ANOVA လူမျိုးကွဲမအရေးပါသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှား [F(3, 144) = 1.61, P = 0.48] သို့မဟုတ်ဗီဒီယို [F(4, 144) = 1.13, P = 0.59] အပေါ် အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ တစ်ရက် 1 အပေါ် ratings ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဒုတိယအချက်ပေါ်တွင်အထပ်ထပ်အစီအမံတွေနဲ့4(အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်နှောင့်နှေးကြားကာလ) ANOVA ×တစ်3(လူမျိုးကွဲ) [လူမျိုးကွဲမအရေးပါသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF(3, 72) = 1.39, P = 0.38] သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးကြားကာလ [F(2, 72) = 1.47, P = 0.46] အပေါ် တစ်ရက် 1 ဘို့ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်.
တစ်ဦးက4ဒုတိယအချက်ပေါ်တွင်အထပ်ထပ်အစီအမံတွေနဲ့5× (လူမျိုးကွဲ) (ဗီဒီယို) ANOVA လူမျိုးကွဲမအရေးပါသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှား [F(3, 144) = 1.34, P = 0.42] သို့မဟုတ်ဗီဒီယို [F(4, 144) = 1.44, P = 0.51] အဘို့စမ်းသပ်နေ့က 1 ဖို့အစည်းအရုံးနေ့က4ထံမှ% ပြောင်းလဲမှုအပေါ် မော်တာအလျင်။ ထို့အပြင်ဒုတိယအချက်ပေါ်တွင်အထပ်ထပ်အစီအမံတွေနဲ့4×တစ်5(လူမျိုးကွဲ) (ဗီဒီယို) ANOVA [လူမျိုးကွဲမအရေးပါသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF(3, 144) = 1.21, P = 0.54] သို့မဟုတ်ဗီဒီယို [F(4, 144) = 1.68, P = 0.33] အဘို့စမ်းသပ်နေ့က 1 ဖို့အစည်းအရုံးနေ့က4ထံမှ% ပြောင်းလဲမှုအပေါ် အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ ratings ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဒုတိယအချက်ပေါ်တွင်အထပ်ထပ်အစီအမံတွေနဲ့4(အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်နှောင့်နှေးကြားကာလ) ANOVA ×တစ်3(လူမျိုးကွဲ) [လူမျိုးကွဲမအရေးပါသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF(3, 72) = 1.42, P = 0.35] သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးကြားကာလ [F(2, 72) = 1.39, P = 0.42] အဘို့စမ်းသပ်နေ့က 1 ဖို့အစည်းအရုံးနေ့က4ထံမှ% ပြောင်းလဲမှုအပေါ် အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်.
ထို့ကြောင့် PB ပါဝင်သောလေးပါး extraversion လူမျိုးကွဲအဘယ်သူအားမျှနှင့် UP စမ်းသပ်အခြေအနေများ, မော်တာအလျင်အပေါ်သက်သေအထောက်အထားပြသအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းသို့မဟုတ်အေးစက်၏အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ် (မည်သည့်အတိုင်းအတာပေါ်တစ်ရက် 1 မှတစ်နေ့လျှင်4ထံမှဆိုလိုသည်မှာမရှိသိသာ% အပြောင်းအလဲ), မဟုတ်သလိုသူတို့ကွာခြားခဲ့ပါဘူး သိသိသာသာနေ့က 1 အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ။ ထို့ကြောင့်ဤအနိမ့်နှင့်မြင့်မားသော extraversion လူမျိုးကွဲယခုတစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့အတူ (ထိုပိုကြီး PB နဲ့ UP အုပ်စုများထွက်ခွာပေါင်းစပ်ခဲ့သည် N 20 ၏) ။ အဆိုပါတွဲအခြေအနေနိမ့်နှင့်အမြင့်မားသောလူမျိုးကွဲ differential ကိုအေးစက်၏ခိုင်ခံ့သောစမ်းသပ်မှုကိုယ်စားပြုဒါကြောင့်သူတို့ကသင်တန်းပေါင်းစပ်မခံခဲ့ရပါ။
မော်တော်နှုန်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သော၏ Group မှနှိုင်းယှဉ် Ratings အဖွဲ့အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု
alpha အောက်ပါဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏နံပါတ်အဘို့ဖြစ်၏ချိန်ညှိ P <0.008 ။ A4(အုပ်စုများ - PB, UP, PL, PH) ×5(ဗီဒီယိုကလစ်များ) ဒုတိယအချက်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်သော ANOVA သည်အုပ်စုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုများမရှိခဲ့ပါ။F(3, 272) = 1.48, P = 0.44] မဟုတ်သလိုဗီဒီယိုများအတွက် [F(4, 272) = 1.51, P တစ်ရက် 0.51 အပေါ် = 1] များအတွက် မော်တာအလျင်။ တစ်ဦးက4(အုပ်စုများ: PB, UP, PL, PH သည်) ကိုဒုတိယအချက်ပေါ်တွင်အထပ်ထပ်အစီအမံတွေနဲ့5(ဗီဒီယိုကလစ်ပ်) ANOVA × [အုပ်စုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF(3, 272) = 19.26, P <0.001; တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta နှစ်ထပ်ကိန်း = 0.10] နှင့်ဗီဒီယိုကလစ်များအတွက်။F(4, 272) = 15.59, P <0.001; အသင်း ၀ င် ၁ မှစမ်းသပ်နေ့ ၄ သို့% ပြောင်းလဲမှုအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta နှစ်ထပ်ကိန်း = ၀.၁၁] မော်တာအလျင်။ Video Clips အပြန်အလှန်×အဆိုပါအဖွဲ့များလည်း [သိသာခဲ့သည်F(12, 272) = 10.43, P <0.001; တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta = 0.14] နှစ်ထပ်။ Tukey Post-hoc နှိုင်းယှဉ် PH ကိုသိသိသာသာပေါ်မော်တာအလျင်အဘို့% ပြောင်းလဲမှုအတွက်အခြားအုပ်စုသုံးစုအပေါငျးတို့သထက်ကျော်လွန်ကြောင်းထင်ရှား Labfront, Portraitနှင့် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗီဒီယို (အားလုံး P's <0.003), ဒါပေမယ့်မ စာကြည့်တိုက် နှင့် မိုးသစ်တော (အားလုံး P's> 0.30) (ဇယား 2; ကိန်းဂဏန်းများ 3A-E) ။ ထို့အပြင်, အခြားသုံးအုပ်စုများ (PB, UP, PL) ၏အဘယ်သူအားမျှအားလုံး (မော်တာအလျင်အဘို့ဗီဒီယိုမဆိုအပေါ်မော်တာအလျင်အဘို့အသီးအသီးကတခြားကနေသိသိသာသာကွဲပြား P's> 0.30) ။ အမှန်စင်စစ် PB, UP နှင့် PL အုပ်စုများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မော်တာအလျင်၏ပြောင်းလဲမှု% လျော့နည်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။
စားပွဲတင်2။ အသင်းအဖွဲ့နှင့်မျိုးသုဉ်းအဆင့်များအတွက်မော်တာအလျင်၏နည်းလမ် (SDs).
ပုံ3။ လေးစမ်းသပ်အုပ်စုများများအတွက်အစည်းအရုံးအဆင့်စဉ်အတွင်းမော်တာအလျင်၏ဆက်စပ်ပံ့ပိုးအေးစက်။ 1 ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအားဖြင့်သွေးဆောင်မော်တာအလျင် (လက်ညှိုးကိုနှိပ်) [၏ဆက်စပ်ပံ့ပိုးကူညီ (စမ်းသပ်ခြင်းနေ့က4ဖို့အစည်းအရုံးနေ့က5ထံမှ% အပြောင်းအလဲ) ၏ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်ပြသစာကြည့်တိုက် (က), မိုးသစ်တော (ခ), Labfront (C), ပုံတူ (ဃ), ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (E) နဲ့] အသင်းအဆင့်၌တည်၏။ သုည% ပြောင်းလဲမှုနေ့က 1 မှတစ်နေ့လျှင်4ထံမှအဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ပြသည်။ PB, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ; unpaired, UP; PL, extraverts အနိမ့်တွဲ; PH ကိုမြင့်မား extraverts တွဲ။
တစ်ဦးက4(အုပ်စုများ: PB, UP, PL, PH သည်)5(ဗီဒီယိုကလစ်ပ်) ANOVA ×ဒုတိယအချက်ပေါ်တွင်အထပ်ထပ်အစီအမံတွေနဲ့အုပ်စုများအတွက်အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှား [F(3, 272) = 1.433, P = 0.49] မဟုတ်သလိုဗီဒီယိုများအတွက် [F(4, 272) = 1.46, P တစ်ရက် 0.45 အပေါ် = 1] များအတွက် အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ ratings ။ တစ်ဦးက4(အုပ်စုများ: PB, UP, PL, PH သည်) ကိုဒုတိယအချက်ပေါ်တွင်အထပ်ထပ်အစီအမံတွေနဲ့5(ဗီဒီယိုကလစ်ပ်) ANOVA × [အုပ်စုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF(3, 272) = 21.37, P <0.001; တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta နှစ်ထပ်ကိန်း = 0.17] နှင့်ဗီဒီယိုကလစ်များအတွက်။F(4, 272) = 16.92, P <0.001; အသင်း ၀ င် ၁ မှစမ်းသပ်နေ့ ၄ သို့% ပြောင်းလဲမှုအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta နှစ်ထပ်ကိန်း = ၀.၁၁] အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ ratings ။ Video Clips အပြန်အလှန်×အဆိုပါအဖွဲ့များလည်း [သိသာခဲ့သည်F(12, 272) = 10.28, P <0.001; တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta = 0.23] နှစ်ထပ်။ Tukey Post-hoc နှိုင်းယှဉ်အပြုသဘောအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေဘို့ PH ကိုသိသိသာသာ% ပြောင်းလဲမှုအတွက်အခြားအုပ်စုသုံးစုအပေါငျးတို့သထက်ကျော်လွန်ကြောင်းထင်ရှား Labfront, Portraitနှင့် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဗီဒီယို (အားလုံး P's <0.003), ဒါပေမယ့်မ စာကြည့်တိုက် နှင့် မိုးသစ်တော (အားလုံး P's> 0.30) (စားပွဲတင် 3; ကိန်းဂဏန်းများ 4A-E) ။ ထို့အပြင်အခြားအုပ်စုသုံးခု (PB, UP, PL) မှမည်သည့်ဗီဒီယိုကလစ်မှမဆိုအပြုသဘောသက်ရောက်မှုများ (P's> 0.30) နှင့်သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ။ အမှန်စင်စစ် PB, UP နှင့် PL အုပ်စုများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုများတွင်% ပြောင်းလဲမှုလျော့နည်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။
စားပွဲတင်3။ အပြုသဘော၏နည်းလမ် (SDs) အသင်းအဖွဲ့နှင့်မျိုးသုဉ်းအဆင့်များအတွက် ratings ထိခိုက်စေ.
ပုံ4။ အပြုသဘော၏အေးစက် Contextual ပံ့ပိုးလေးစမ်းသပ်အုပ်စုများများအတွက်အစည်းအရုံးအဆင့်ကာလအတွင်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Contextual ပံ့ပိုးကူညီ၏ဒီဂရီအပြုသဘော၏ (စမ်းသပ်ခြင်းနေ့က 1 ဖို့အစည်းအရုံးနေ့က4ထံမှ% အပြောင်းအလဲ)5ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအားဖြင့်သွေးဆောင် ratings ထိခိုက်စေ [ဖြစ်ပါတယ်ပြသစာကြည့်တိုက် (က), မိုးသစ်တော (ခ), Labfront (C), ပုံတူ (ဃ), ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (E) နဲ့] အသင်းအဆင့်၌တည်၏။ သုည% ပြောင်းလဲမှုနေ့က 1 မှတစ်နေ့လျှင်4ထံမှအဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ပြသည်။ PB, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ; unpaired, UP; PL, extraverts အနိမ့်တွဲ; PH ကိုမြင့်မား extraverts တွဲ။
ထို့ကြောင့်သာ PH ကိုမော်တာအလျင်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တစ်နေ့ 1 စုံစမ်းဖို့အစည်းအရုံးနေ့က4ထံမှ% ပြောင်းလဲမှုအတွက်သိသိသာသာတိုးဖြစ်စေအမတ်များနှင့် Lab မှတစ်ဦးကစကားစပ် (အတူတွဲခဲ့သုံးခုကဗီဒီယိုကလစ်များဖို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပြသLabfront, Portrait) သို့မဟုတ်မြင့်မားသောမွေးရာပါမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုခဲ့ (ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ) ။ PH ကိုသက်သေအထောက်အထားအမတ်သို့မဟုတ် Lab မှတစ်ဦးကစကားစပ် (နှင့်အတူတွဲမပေးခဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအဘို့% ပြောင်းလဲမှုအတွက်တိုးပွါးကြဘူးစာကြည့်တိုက်) သို့မဟုတ်ကြောင့်နိမ့်မွေးရာပါမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုခဲ့ (မိုးသစ်တော) ။ PH သည်အားဖြင့်မော်တာအလျင်ထဲမှာ% ပြောင်းလဲမှုတိုးဘို့အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်ခြင်း, 19-28% ၏တိုးကနေအထိသိသိသာသာခဲ့သည် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ။ အပြုသဘောအတွက်% ပြောင်းလဲမှုတိုး PH သည်အားဖြင့် ratings ထိခိုက်စေဘို့အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်ခြင်း, 105-126% ၏တိုးကနေအထိ, အထူးသဖြင့်သိသိသာသာခဲ့သည် ပုံတူ [အမျိုးသမီးပုံတူယောက်ျားသင်တန်းသားများကိုပိုပြီးအကြိုးခဲ့ကြပေမည်ဖြစ်သော်လည်းသတိပြုပါ, ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေ့က 1 မှတစ်နေ့လျှင်4ကနေပြောင်းလဲမှုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ဤအရပ်မှသာအေးစက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုယ်စားပြု] ။ PH သည်များအတွက်, မော်တာက x အတွက်% ပြောင်းလဲမှုအတွက်အတွင်း-ဘာသာရပ်တိုးဘို့သိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်း variable တွေကို (Pearson ထုတ်ကုန်-အခိုက်) ကိုထိခိုက် Labfront (r = 0.49, P <0.05), ပုံတူ (r = 0.52, P <0.05) နှင့် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (r = 0.50, P <0.05), သင်တန်းသားများကိုအတွင်းနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော DA-modulated တုန့်ပြန်မှုစနစ်များကိုဖြတ်ပြီးပူးတွဲအေးစက်အခြေအနေတွင်ပံ့ပိုးညွှန်ပြ။
Visuospatial အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်၏ Group မှနှိုင်းယှဉ်
alpha မှာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏အရေအတွက်ညှိခဲ့ P <0.03 ။ A-4 (အုပ်စုများ - PB, UP, PL, PH) ×3(နှောင့်နှေးကြားကာလ) ANOVA သည်ဒုတိယအချက်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာမှုများပြုလုပ်သောကြောင့်အုပ်စုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုများမရှိခဲ့ပါ။F(3, 136) = 1.53, P <0.39] မနှောင့်နှေးသောကာလများအတွက် [F(2, 136) = 1.49, P များအတွက်နေ့က 0.34 ရက်နေ့တွင် <1] visuospatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တိကျမှန်ကန်မှု။ တစ်ဦးက4(အုပ်စုများ: PB, UP, PL, PH သည်)3(နှောင့်နှေးကြားကာလ) ANOVA ×ဒုတိယအချက်ပေါ်တွင်အထပ်ထပ်အတိုင်းအတာနှင့်အတူ [အုပ်စုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုထင်ရှားF(3, 136) = 18.45, P <0.001; တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta နှစ်ထပ်ကိန်း = 0.18] နှင့်နှောင့်နှေးကြားကာလများအတွက် [F(2, 136) = 21.72, P <0.001; အသင်း ၀ င် ၁ မှစမ်းသပ်နေ့ ၄ သို့% ပြောင်းလဲမှုအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta နှစ်ထပ်ကိန်း = ၀.၁၁] visuospatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တိကျမှန်ကန်မှု။ နှောင့်နှေးအပြန်အလှန်×အဆိုပါအဖွဲ့များ [လည်းသိသာခဲ့သည်F(6, 136) = 13.13, P <0.001; တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta နှစ်ထပ်ကိန်း = 0.31] (ဇယား 4; ဂဏန်း 5) ။ Tukey Post-hoc နှိုင်းယှဉ်အားလုံး (လေးပါးအုပ်စုများ 1 ့များ၏နှောင့်နှေးကြားကာလအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်တိကျမှန်ကန်မှုအတွက်တစ်နေ့4မှတစ်နေ့လျှင် 0.5 ထံမှ% ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကွာခြားမထင်ရှား P's> 0.30) ။ သို့သော် PH သည်အခြားအုပ်စုသုံးစုလုံးကို% ပြောင်းလဲမှုနှင့်သိသိသာသာ ကျော်လွန်၍ အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဥာဏ်တိကျမှုအတွက်% s ပြောင်းလဲမှုနှင့်နှောင့်နှေးကြားကာလများတွင် ၄.၀ နှင့် ၈.၀ စ (အားလုံး P's <0.003) ။ အခြားအုပ်စုသုံးစု (PB, UP, PL) သည်မည်သည့်နှောင့်နှေးကြားကာလတွင်မဆိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားစွာကွဲပြားမှုမရှိပါ P's> 0.30) ။ အမှန်စင်စစ် PB, UP နှင့် PL အုပ်စုများသည်နှောင့်နှေးသောအချိန်ကာလတိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဥာဏ်တိကျမှုတွင်% ပြောင်းလဲမှုလျော့နည်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် PH သည်နှောင့်နှေးသောကာလမှ 0.5 s သို့ 4.0 s သို့% ပြောင်းလဲမှုသိသိသာသာတိုးလာကြောင်းပြသခဲ့သည် (P <0.003) နှင့်သိသိသာသာတိုးမြှင့်နှောင့်နှေးကြားကာလကနေ 4.0 s ကိုမှ 8.0 s ကို% ပြောင်းလဲမှုကိုတိုး (P <0.003) (ဇယားကိုကြည့်ပါ4နှင့်ပုံ 5) ။ PH သည်များအတွက်% ပြောင်းလဲမှုတိုးတိုးရှည်လျားမှတ်ဉာဏ်နှောင့်နှေးကာလအလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း dorsolateral prefrontal cortex အတွက် DA လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အညီဖြစ်သည့်နှောင့်နှေး 29 ့, (အနည်းဆုံးနှောင့်နှေး 4.0 ့မှာ + 47% ကနေ + 8.0% အထိသိသိသာသာခဲ့ကြသည်Luciana et al ။ , 1992, 1998; Luciana နှင့် Collins, 1997).
စားပွဲတင်4။ အသင်းအဆင့် visuospatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ% အပြောင်းအလဲအတွက်နည်းလမ် (SDs).
ပုံ5။ လေးစမ်းသပ်အုပ်စုများများအတွက်အစည်းအရုံးအဆင့်စဉ်အတွင်း visuospatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏ဆက်စပ်ပံ့ပိုးအေးစက်။ အသင်းအဆင့် Lab မှတစ်ဦး၏အထွေထွေအခြေအနေတွင်အားဖြင့်သွေးဆောင် visuospatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏ဆက်စပ်ပံ့ပိုးကူညီ (စမ်းသပ်ခြင်းနေ့က 1 ဖို့အစည်းအရုံးနေ့က4ထံမှ% အပြောင်းအလဲ) ၏ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်ပြသ။ PB, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ; unpaired, UP; PL, extraverts အနိမ့်တွဲ; PH ကိုမြင့်မား extraverts တွဲ။
PH သည်သင်တန်းသားများအဘို့, 8.0 s ကိုနှောင့်နှေးမှာ% ပြောင်းလဲမှုတိုးမော်တာအလျင်ထဲမှာ% ပြောင်းလဲမှုတိုးနှင့်အတူသိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်း (r = 0.49, P <0.05) နှင့်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေသည် (r = 0.57, P <0.05) ရန် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နောက်တဖန်သင်တန်းသားများကိုအတွင်းသုံးကွဲပြားခြားနားသော DA-modulated တုံ့ပြန်မှုစနစ်များကိုဖြတ်ပြီးပူးတွဲ conditional Contextual အတွင်း-ဘာသာရပ်ပံ့ပိုးကူညီညွှန်ပြဗီဒီယိုအားကလစ်။ [အဖို့အကျိုးသက်ရောက်စေတုံ့ပြန်မှု ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဒါဟာ] အပြုသဘော၏အပြင်းထန်ဆုံးထိခိုက်စေသော induction ထိခိုက်စေခဲ့သောကွောငျ့ကလစ်, အခြားမှီခို variable တွေကိုနှင့်အတူပတျသကျဖို့ကဒီမှာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု, arousal, သိမှုဆိုင်ရာအာရုံနှင့်တစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထားအမြင်အာရုံရှာဖွေရေး (သို့သော်မပေးတိတိကျကျအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွက်) တွင်ပါဝင်ပတ်သက် sensorimotor ဖြစ်စဉ်များ (အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်နှောင့်နှေးနှင့်အတူ 16 လှုံ့ဆော်မှုစမ်းသပ်မှုတွေ၏ non-mnemonic Spatial တည်နေရာတာဝန်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်အပေါ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမတ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ တိကျမှန်ကန်မှုကိုကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်ရှိရာနေ့က 0.0 ပေါ်တွင်4့) ။ Adjustments alpha ခဲ့သည် P <0.007 ။ One-Way ANOVA ၏နှိုင်းယှဉ်မှုတိကျမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ။F(3, 64) = 1.23, P = 0.45] သို့မဟုတ် RT ကို [F(3, 64) = 1.51, P = 0.48 s ကိုတစ်ဦးနှောင့်နှေးမှာလေးယောက်အုပ်စုများ၏ 0.0] ။ ထို့အပြင်တစ်ဦး bi-အက္ခရာဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုလည်းအာရုံစူးစိုက်မှု, arousal, သိမှုဆိုင်ရာအာရုံနှင့်ပျက်ကွက် + ကော်မရှင်အမှားအယွင်းများ (ထငျရှားပစ်မှတ်အက္ခရာများ + အရေအတွက်မှားယွင်းစွာ Non-ပစ်မှတ်အက္ခရာများမှတ်သားရှိရာနေ့က4ပေါ်တွင် sensorimotor ဖြစ်စဉ်များအပေါ်အမတ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်, အသီးသီး) စာရင်းပြုစုထားသောခဲ့ကြသည်။ bi-အက္ခရာတိကျမှန်ကန်မှုကိုရမှတ်များအတွက် One-Way ကို ANOVA အတွက်လေးအုပ်စုများအတွက်အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအဓိကသက်ရောက်မှု [ရှိခဲ့သည်F(3, 64) = 1.43, P = 0.42] ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက်များအာရုံစိုက်မှု, arousal, သိမှုဆိုင်ရာအာရုံနှင့် sensorimotor ဖြစ်စဉ်များအပေါ်အမတ်သက်ရောက်မှုများအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်ရလဒ်များကိုအုပ်စုကွဲပြားမှုများအတွက်အကောင့်ဘူးကဖော်ပြသည်။
မော်တော်နှုန်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအဆိုပါ Extinction အဆင့်အတွက်အကျိုးသက်ရောက်
(1 မှနေ့ရက်ကာလ၌% ပြောင်းလဲမှု4သုဉ်းသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်များအတွက်အေးစက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်) မျိုးသုဉ်း-အဆင့်ဒေတာမော်တာအလျင်ထဲမှာ% ပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ရက်ပေါင်း 5,7နှင့် 1 ၏တစ်ဦးချင်းစီမှတစ်နေ့4ကနေအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဇယား; သာ PH သည်သိသာထင်ရှားသောအေးစက်သရုပ်ပြ (အခြားအုပ်စုများရက်ပေါင်း 4-7 ဖြတ်ပြီးတစ်ဦးအဆင့်ကိုလိုင်းပြသသောကြောင့် 2, 3), ကိုသာ PH ကို Extinction ဒေတာအေးစက်သက်သေသောသုံးဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအဘို့ဆန်းစစ်နေကြသည်: Labfront, Portraitနှင့် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (ဇယား 4; ကိန်းဂဏန်းများ 6A, B,) ။ alpha မှာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအရေအတွက်များအတွက်ချိန်ညှိခဲ့သည် P <0.13 ။ အချက် (၃) ခု (ဗီဒီယိုကလစ်ပ်များ) × ၃ (ရက် ၄၊ ၅၊ ၇) ANOVA သည်အချက်နှစ်ချက်လုံးကိုထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာသည့်အနေဖြင့်နေ့များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။F(2, 84) = 14.37, P <0.001; တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta နှစ်ထပ်ကိန်း = 0.15] ဒါပေမယ့်ဗွီဒီယိုကလစ်များအတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါF(2, 84) = 1.92, P အတွက်% ပြောင်းလဲမှုအပေါ် = 0.43] မော်တာအလျင် (ပုံ 6A) အသင်းမှနေ့က 1 ကနေနေ့က 4,5နှင့်7ရန်။ Tukey Post-hoc စမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်နေ့က4vs. ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းနေ့က5အပေါ်% ပြောင်းလဲမှုအားလုံး (သုံးယောက်ကဗီဒီယိုကလစ်များမဆိုဘို့သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းပြသ P''> 0.30), အခြေအနေတွင်အခြေအနေတွင်ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုခြွင်းချက်မရှိပါလီမန်မူးယစ်ဆေးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်းအတွက်5နေ့၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းညွှန်ပြ။ တစ်နေ့ ၅ နှင့် ၇ ရက်ကို% ပြောင်းလဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကနေ့ ၅ သည်ဗီဒီယိုကလစ်သုံးခုလုံးအတွက်နေ့ ၇ ကိုကျော်လွန်သွားသည် P's <0.003) ။ ပုံတွင်တွေ့မြင်အဖြစ် 6Aနေ့တုံ့ပြန်7မော်တာသုံးခုစလုံးဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအပေါ်နေ့က 1 (ထို 0% ပြောင်းလဲမှု dashed လိုင်းအားဖြင့်ညွှန်ပြ) ၏အဆင့်မှာဒါမှမဟုတ်အနီးဖြစ်ခဲ့သည်။
ပုံ6။ မော်တာအလျင် (က) ၏အခွအေနေ Contextual ပံ့ပိုးကူညီ၏မျိုးသုဉ်း (ရက် 5,6နှင့်7စဉ်အတွင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ) နှင့်အပြုသဘောကိုအောင်မြင်စွာ (ဗီဒီယိုကလစ်ပ်အေးစက်မှ (ခ) ကိုထိခိုက်Labfront, Portraitနှင့် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ) အခြေအနေမှတစ်ခုတည်းသောပါဝင်သူဖြစ်နှင့်သော PH သည်သင်တန်းသားများကို () ၌တည်၏။ conditional Contextual ပံ့ပိုးကူညီ၏မျိုးသုဉ်း၏ဘွဲ့စမ်းသပ်မှုနေ့က 1 အပေါ်တုံ့ပြန်အတွက်% ပြောင်းလဲမှု (နေ့က4ကနေအပြောင်းအလဲ), တစ်နေ့တာ 5, နေ့7အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ methylphenidate ၏ခြွင်းချက်မရှိသက်ရောက်မှုပျက်ကွက်ကြောင့်တစ်နေ့လျှင်5အပေါ်တုံ့ပြန်သောအေးစက်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အညွှန်းကိန်း (စမ်းသပ်ခြင်းနေ့က4အပေါ်တုံ့ပြန် facilitated မှတူ၏ဒီဂရီ) တုံ့ပြန် facilitated သည်သာအခြေအနေတွင်မှတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ PH ကိုမြင့်မား extraverts တွဲ။
3 ×တစ်ဦးက3(ဗီဒီယိုကလစ်ပ်) နှစ်ဦးစလုံးအချက်များပေါ်တွင်အထပ်ထပ်အတိုင်းအတာနှင့်အတူ (ရက် 4, 5, 7) ANOVA နေ့ရက်ကာလအဘို့သိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား [F(2, 84) = 19.42, P <0.001; တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း eta နှစ်ထပ်ကိန်း = 0.28] ဒါပေမယ့်ဗွီဒီယိုကလစ်များအတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါF(2, 84) = 1.62, P အတွက်% ပြောင်းလဲမှုအပေါ် = 0.38] အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ (ပုံ 6B) အသင်းမှနေ့က 1 ကနေနေ့က 4,5နှင့်7ရန်။ Tukey Post-hoc စမ်းသပ်မှုများအားလုံး (နေ့က4vs. နေ့က5အပေါ်% အပြောင်းအလဲသုံးခုကဗီဒီယိုကလစ်များမဆိုဘို့သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းပြသ P''> 0.30), အခြေအနေတွင်အခြေအနေတွင်ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုခြွင်းချက်မရှိပါလီမန်မူးယစ်ဆေးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်းအတွက်5နေ့၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းညွှန်ပြ။ တစ်နေ့ ၅ နှင့် ၇ ရက်ကို% ပြောင်းလဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကနေ့ ၅ သည်ဗီဒီယိုကလစ်သုံးခုလုံးအတွက်နေ့ ၇ ကိုကျော်လွန်သွားသည် P's <0.003) ။ ပုံတွင်တွေ့မြင်အဖြစ် 6B, အပြုသဘော ratings ထိခိုက်စေ7နေ့သုံးခုစလုံးကဗီဒီယိုကလစ်များပေါ်တွင်တစ်နေ့လျှင် 1 (ထို 0% ပြောင်းလဲမှု dashed လိုင်းအားဖြင့်ညွှန်ပြ) ၏အဆင့်မှာဒါမှမဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက် extraversion အပြုသဘောဆုလာဘ်နှင့်အတူအခင်းအကျင်းပေါင်းသင်းကြောင်းဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီကောက်ချက်များ၏အားကောင်းငါးခုတွေ့ရှိချက်များကညွှန်ပြနေသည်:
(က) တစ်ဦးမော်တာအလျင်နေ့ 1 စုံစမ်းမှ PH သည်အတွက်ဒါပေမဲ့နည်းနည်း-to-အဘယ်သူမျှမရှောက်ရေးအသင်းနေ့က4ဖြတ်ပြီး PL ထဲမှာတုံ့ပြန်၏သိသာထင်ရှားသောဝယ်ယူ Contextual ပံ့ပိုး, အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ရှိခဲ့သည်။ တကယ်တော့, ယေဘုယျအားဖြင့်ပြသ PL အားလုံးအစီအမံအပေါ်နေ့က 1 မှတစ်နေ့လျှင်4ထံမှတုံ့ပြန်၏အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့လေ၏။ ဆနျ့ကငျြအတွက်အလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်များအတွက်အသင်းမှနေ့က4မှစမ်းသပ်မှုနေ့က 1 ဆွေမျိုးအပေါ် PH သည်အားဖြင့်တုံ့ပြန်မော်တာအလျင်အဘို့အ 19-21% ၏တိုးရာမှ variable တွေကိုဖြတ်ပြီးအထိသိသိသာသာကြီးအပြုသဘောအဘို့အ 105-126% ကိုထိခိုက်တိုးမြှင့်ခြင်း, 29 နှင့် 47% အသီးသီး 4.0 s နှင့် 8.0 s ကို၏နှောင့်နှေး။ ထိုကဲ့သို့သောပံ့ပိုးအမတ် (ဆိုလိုသည်မှာနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ PH သည်၌တွေ့ခြင်းမရှိပါ, စာကြည့်တိုက် နှင့် မိုးသစ်တော) သို့မဟုတ်အဘယ်သူမျှမမွေးရာပါမက်လုံးပေးတန်ဖိုး (မုတ်သုံသစ်တော) ရှိခဲ့ပါတယ်။
(ခ) အနံ မော်တာ, အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုဖြတ်ပြီးဝယ်ယူ Contextual ပံ့ပိုးကူညီ၏ PL PH သည်အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုမှတပါး, PH သည်အတွက်အေးစက်ပံ့ပိုးလည်း (အညီအမျှအေးစက်သူတို့ရဲ့လွယ်ကူခြင်းနှင့်ခွန်အား၌ကွာခြားကြောင်းအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်ဟော်လန်, 1992; Graybiel, 1998) [သွယ်ဝိုက်, Contextual လှုံ့ဆော်မှု (Labfront) vs. ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, discrete လှုံ့ဆော်မှု (ပုံတူ)] နှင့်ဖွယ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ကိုလမ်းကြောင်း [ဆိုလိုသည်မှာ ventral (တစ်လျှောက်လုပ်ငန်းများ၌နေကြတယ်ပုံတူ) နှင့် dorsal (Labfront) အမြင်အာရုံစီး] ။ ထို့ကြောင့်ကျယ်ပြန့်သောအခြေအနေများ Contextual ပံ့ပိုးကွဲပြားခြားနားသော domains များ (မော်တာ, အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်သိမြင်မှု) ကိုဖြတ်ပြီးနှင့် PH သည်သင်တန်းသားများအဘို့အလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုး (ယေဘုယျအခြေအနေတွင်နှင့် discrete အရာဝတ္ထုနှိုးဆွ) အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
(ဂ) သိသာထင်ရှားသောရှိခဲ့သည် သင်တန်းသားများကိုအတွင်းဆက်စပ်မှု 0.46 ထံမှ 0.52 အထိအားလုံးသုံး domains များ (သိမြင်မော်တာ, အကျိုးသက်ရောက်စေ) ၏ပေါင်းစပ်ဖြတ်ပြီး။
(ဃ) Extinction (နေ့က 5) ၏ပထမဦးဆုံးနေ့၌ PH သည်အားဖြင့်ကြံ့ခိုင်သောအခြေအနေများ Contextual ပံ့ပိုးအမတ်၏ခြွင်းချက်မရှိသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းရှိနေသော်လည်းရှိခဲ့သည်။
(င) က Non-တိကျတဲ့, ယေဘုယျ Contextual လှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, Lab မှတစ်ဦး) (မြင့်မားသောမက်လုံးပေး salience ၏သဘာဝဖြစ်ကြောင်းအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမှ PH သည်သင်တန်းသားများအတွက်နေ့၌နေ့က4မှ 1 ဆွေမျိုးတုံ့ပြန်၏တိုးမြှင်ပံ့ပိုးရူးနှမ်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲ), မဟုတ်အနည်းငယ်သာမက်လုံးပေး salience ၏လှုံ့ဆော်မှုမှ (မိုးသစ်တော()Jodogne et al ။ , 1994; Schultz et al ။ , 1997; Robinson နဲ့ Berridge, 2000) ။ ထို့ကြောင့်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများအပိုင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည်နှင့်အညီ, တသောတိုးမြှင့်တုန့်ပြန်ကောက်ချက်ချစေခြင်းငှါ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နေ့၌4(သာ PH သည်သင်တန်းသားများအတွက် Contextual အေးစက်အပေါ်မှီခိုခဲ့Robinson နဲ့ Berridge, 2000).
ထို့ကြောင့်အခြေအနေတွင်လေ့လာမှု (ဆိုလိုသည်မှာ, PH သည်) ၏အသင်းကအဆင့်စဉ်အတွင်း Lab မှတစ်ဦးအတွက်အမတ်နှင့်အတူတွဲခဲ့ကွောငျးမွငျ့မား extraverts သုံးခုဖြစ်စဉ်များသင်တန်းသားများကိုအတွင်းပံ့ပိုးကူညီ၏ပြင်းအားအတွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဘယ်မှာမော်တာ, အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ, ဖြတ်ပြီးကျယ်ပြန့်အေးစက် Contextual ပံ့ပိုးထင်ရှား နှင့်အရာအမတ်များ၏အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်မရှိသက်ရောက်မှုပစ္စုပ္ပန်သောအခါ Extinction ၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကသို့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ဤရွေ့ကားအေးစက်သက်ရောက်မှု Lab မှတစ်ဦးက (ဆိုလိုသည်မှာ, PB နဲ့ UP) တွင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရန်မထိတွေ့ခဲ့သူကိုဖြစ်စေ, လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖို့ပေမယ့် (ဆိုလိုသည်မှာ, UP Lab က B ကိုအတွက်) ကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေတွင်ထိတွေ့ခဲ့သူကိုမြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့် extraverts အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရပါ။ အမှန်စင်စစ် PB နဲ့ UP အုပ်စုများယေဘုယျအားဖြင့်ပုံကြောင့် Lab ကထပ်ခါတလဲလဲတင်ဆက်မှုတစ်ဦးကစကားစပ်အမတ်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲမက်လုံးပေးတန်ဖိုးပျက်ကွက်ဖြစ်တှေ့ဖို့, အစည်းအရုံးနေ့က4မှစမ်းသပ်မှုနေ့က 1 ဆွေမျိုးအပေါ် Contextual ပံ့ပိုးကူညီတဲ့အလယ်အလတ်အရှုံးပြသသည်။
သူတို့အသင်းကတစ်နေ့လျှင်4မှစမ်းသပ်မှုနေ့က 1 ဆွေမျိုးမသိသိသာသာ conditional Contextual ပံ့ပိုးထင်ရှားကတည်းကအရေးအကြီးဆုံးကတော့နိမ့် extraverts Lab မှတစ်ဦးက (ဆိုလိုသည်မှာ, PL) တွင်ပါလီမန်အမတ်နှင့်ထိတွေ့ပုံပါလီမန်အမတ်များအနေဖြင့်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမကြိုးသက်ရောက်မှုကြုံတွေ့, ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ဆေးထိုး။ ဤသည် PH သည်သင်တန်းသားများကိုဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးထိုးကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အမတ်-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်မှ PL သင်တန်းသားများကိုထက်ပိုပြီးအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ (ဤ extraversion လှုံ့ဆော်မှုဆုချသို့မဟုတ်မက်လုံးပေးဖို့ reactivity ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းအယူအဆထောကျပံ့ပေးလိမ့်မည်, ဤကွဲပြားခြားနားမှု Contextual အေးစက်များအတွက်သက်ရောက်မှုရှိသည်Depue et al ။ , 1994; မီးခိုးရောင်, 1994; Depue နှင့် Collins, 1999).
သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများ DA မော်ဂျူ extraversion နှင့်တုံ့ပြန်၏ conditional Contextual ပံ့ပိုးကူညီ၏ပြင်းအားအကြားစပ်လျဉ်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာတိရိစ္ဆာန်များအတွက် NAc အတွက် DA လည်ပတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ဆုလာဘ်-သွေးဆောင် conditional Contextual (များ၏ (က) ဝယ်ယူဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ချိတ် et al ။ , 1992; Cabib, 1993; Jodogne et al ။ , 1994; Wassum et al ။ , 2011), (ခ) မက်လုံးပေး၏ပြင်းအားအခြေအနေတွင်မှစွပ်စွဲ (ချိတ် et al ။ , 1992; Cabib, 1993; Jodogne et al ။ , 1994; Robinson နဲ့ Berridge, 2000) နှင့် (ဂ) မူးယစ်ဆက်စပ်တွေကိုများ၏ထိရောက်မှုသိသိသာသာအဆိုပါ NAc အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်မြှင့်တင်ရန် (Berke နှင့် Hyman, 2000; Everitt et al ။ , 2001) ။ အထက်ပြန်လည်သုံးသပ်အဖြစ်ဒုတိယအ, အမတ်လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်၏ခံစားချက်များကိုတစ်ဦးအစွမ်းထက် DA agonist နှင့်သွေးဆောင်သည်။ ဒါဟာအခြေအနေတွင် (ဆိုလိုသည်မှာ, PB နဲ့ UP ပါဝင်သူ) နဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွဲမအခြေအနေများအတွက် extraverts ကြောင်းနှင့်ညီမျှမြင့်မားတဲ့အတွက် PH သည်သင်တန်းသားများအတွက် Contextual ပံ့ပိုးသရုပ်ပြဖို့အရေးပါခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာရှေ့နောက်စကားနှင့်အတူလွှတ်တော်အမတ်၏တွဲဖက်မှုထိုကဲ့သို့သော conditional ပံ့ပိုးဆည်းပူးခဲ့ဘူးခဲ့ပါတယ်။ တတိယအချက် Extinction ၏ပထမနေ့၌ PH သည်သင်တန်းသားများအတွက်အခွအေနေပံ့ပိုးကူညီခြင်း၏ရှေ့မှောက်တွင် (အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်မရှိအမတ်သက်ရောက်မှုပစ္စုပ္ပန်ဘယ်မှာရှိ) ကိုလည်း cue-သွေးဆောင် NAc DA လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် (Ranaldi et al ။ , 1999; Devilbiss နှင့် Berridge, 2008) ။ စတုတ္ထ, မော်တာအလျင်၏ပံ့ပိုးများ၏မှီခိုအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ, အထက်တွင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် visuospatial အဆိုပါ NAc မှ VTA DA စီမံချက်များအပေါ်မှတ်ဥာဏ်လုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ဆောင်နေနှင့်အသီးသီး prefrontal cortex dorsolateral အဖြစ်, ကောင်းစွာ (တိရစ္ဆာန်နဲ့လူသားတို့တည်တတ်၏Luciana et al ။ , 1992, 1998; Luciana နှင့် Collins, 1997; Depue နှင့် Collins, 1999; Devilbiss နှင့် Berridge, 2008; McNab et al ။ , 2009; Aart et al ။ , 2011) ။ ပဉ္စမ, DA ပံ့ပိုးအပေါ်တောင်းဆိုမှုများတိုးပွားလာကြသောအခါ, ဒီမှာတွေ့ရှိခဲ့ရှည်တုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေးနှင့်အတူမှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်၏ဆက်စပ်ပံ့ပိုးများ၏တိုးပွားလာထိရောက်မှုလည်း DA များအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ် (Luciana et al ။ , 1992, 1998; Luciana နှင့် Collins, 1997) ။ နှင့်ဆဋ္ဌမ, သာ PH သည်ပေမယ့် PL မဟုတ်သင်တန်းသားများကို context-မက်လုံးပေးဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့ဝယ်ယူကြောင်းအထက်ပြန်လည်သုံးသပ် DA လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် extraversion အကြားအပြုသဘောစပ်လျဉ်းရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
DA လွှတ်ပေးရန် locomotor လှုပ်ရှားမှုမက်လုံးပေးပံ့ပိုးပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်အပြုသဘော (အကျိုးသက်ရောက်စေရှိရာ NAc မှ midbrain စီမံကိန်းကိုပိုမိုအကြာတွင် positioned VTA DA အာရုံကြောလူမျိုးကွဲDepue နှင့် Collins, 1999; Olson et al ။ , 2005; လယ်ကွင်းများ et al ။ , 2007) ။ ဆနျ့ကငျြ, ပို medially (ဥပမာ dorsolateral prefrontal cortex အဖြစ် cortical ဒေသများမှ VTA DA အာရုံကြောလူမျိုးကွဲစီမံကိန်းကိုတည်ရှိသောနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များလွယ်ကူချောမွေ့Goldman-Rakic, 1987; Luciana et al ။ , 1992, 1998; လယ်ကွင်းများ et al ။ , 2007) ။ မက်လုံးပေးမော်တာများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ variable တွေကိုအားဖြင့်ထင်ဟပ်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအဖြစ် visuospatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အားဖြင့်ရည်ညွှန်းသိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ, အလားတူသက်သေအေးစက် Contextual ပံ့ပိုးကူညီခြင်း, ဤသုံးပါး variable တွေကိုသင်တန်းသားများကိုအတွင်းအချင်းချင်း% ပြောင်းလဲမှုအတွက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းအကြောင်း, corticolimbic ထံမှ afferents ကြောင်းအကြံပြုဆိုတဲ့အချက်ကို အဆိုပါ VTA မှဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင်ဒေသများ (ကွဲပြား VTA DA နျူကလီးယားလူမျိုးကွဲအနှံ့ကျယ်ပြန့် excitatory သက်ရောက်မှုရှိOades နှင့် Halliday, 1987; Taber et al ။ , 1995; Luciana et al ။ , 1998; Groenewegen et al ။ , 1999b; Berke နှင့် Hyman, 2000; Carr ကနှင့် Sesack, 2000) ။ ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းအခင်းအကျင်း (ဆုချဖို့ချဉ်းကပ်မှုကိုသက်ဝင်ကြောင်းမက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များသာအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ပေါ်လာBerke နှင့် Hyman, 2000; Hyman နှင့် Malenka, 2001), ဒါပေမယ့်လည်းရည်မှန်းချက်-oriented ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အပြုအမူကိုလမ်းညွှန်ကြောင်းအမူအကျင့်မဟာဗျူဟာများနှင့်ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားဖျန်ဖြေကြောင်းသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ (Everitt et al ။ , 2001; Hyman နှင့် Malenka, 2001) ။ ဤသည်ရှုထောင့် (extraversion ကြိုးရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူပါဝငျအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းနှင့်သိမြင်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုနှစ်ဦးစလုံးပါဝငျကွောငျးအကြံပြုမီးခိုးရောင်နှင့် Braver, 2002; Depue နှင့်ဖူ, 2012).
PH ကိုမှာတွေ့ရတဲ့အေးစက်ဆက်စပ်ဆိုးကျိုးများ extraversion ၏ရိုမှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ neuroticism နှင့်သတ် (Impulse) ၏နှစ်ခုအဓိက Higher-အလို့ငှာစရိုက်များပေါ်အလယ်တန်းခြောက်လ deciles ကြှနျတျောတို့၏သင်တန်းသားများကိုကန့်သတ်ထားကြောင်းရွေးချယ်ရေးစံကိုအသုံးပြုထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေးချယ်မှုနည်းလမ်း extraversion မှရလဒ်များတိကျတဲ့အာမခံဖို့ကူညီပေးသည်နေစဉ်, ဒါကြောင့်လည်းအခြားအမြင့်အမိန့်စရိုက်များနှင့်အတူ extraversion ၏ပေါင်းစပ်၏အပြည့်အဝအကွာအဝေးကိုကိုယ်စားပြုမလေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းစပ် (ဥပမာ, မြင့်သော extraversion နှင့်အနိမ့်သတ်) (အေးစက်သက်ရောက်မှုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းငှါDepue နှင့်ဖူ, 2012) ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအေးစက်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်စရိုက်များ၏ interaction က၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျယ်ပြန့်အဆင့်တွင်လက်ရှိတွေ့ရှိချက် extraversion ၏သဘောသဘာဝအပေါ်ထပ်မံအလင်းကိုသွန်း။ အမှတ်နှစ်ခု extraversion အကြောင်းကိုအဓိကထားရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးစွာသလောက်မျိုးရိုးဗီဇအတွက်သုတေသန, ဆေးဝါးဗေဒ, စိတ်ပညာနှင့် neuroscience ယခုအကြံပြု, extraverted အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကအဓိကပံ့ပိုးသည့် VTA DA-NAc / cortical လမ်းကြောင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်တစ်ဦးချင်းကွာခြားမှုဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ DA လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်အပြောင်းအလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအကြံပြုသကဲ့သို့ကောင်းစွာမက်လုံးအေးစက်နိုင်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆွဲထုတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကထင်ရှားနေသည်။ ထို့ကြောင့်, ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း 7, extraverted အပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပြုအမူ၏ Initiative (အထောက်အကူပြုသောပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းအချက်များများ၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်တွက်ဆကိုကိုယ်စားပြုမယ့်တံခါးခုံမော်ဒယ်အားဖြင့်သရုပ်ဖော်နိုင်ပါတယ်Stricker နှင့် Zigmond, 1986; အဖြူ, 1986; Depue နှင့် Collins, 1999) ။ နောက်ဆုံးမှာအဓိကအားထားတဲ့ခြွင်းချက်မရှိသို့မဟုတ် conditional မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ဆုလာဘ်၏ပြင်းအားတစ် function ကိုဖြစ်သည့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ (ဈ) ကိုပြင်းအား: extraversion ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့တံခါးခုံနှစ်ခုရဲ့အဓိက variable တွေကိုများ၏ပူးတွဲ function ကိုအားဖြင့်အများဆုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်မာန်တင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း DA postsynaptic အဲဒီ receptor activation ၏, နှင့် (ii) အဆင့်အထိ။ အဲဒီနှစျခု variable တွေကိုများ၏အပြန်အလှန်ပုံထဲမှာ Trade-off function ကိုဖန်တီး 7အဘယ်မှာရှိသနည်း (မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုပြင်းအားနှင့် DA activation ၏) တန်ဖိုးများအားလုံး extraverted အပြုအမူအဖြစ်ထင်ရှားစွာပြကြောင်းမက်လုံးပေးဆုလာဘ်ဖြစ်စဉ်များ၏ activation တစ်ထောင့်ဖြတ်ကိုယ်စားပြုနိမ့်ဆုံးခုံတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်။ နှစ်ခု input ကို variable တွေကိုအပြန်အလှန်ကြောင့်အတွက်လွတ်လပ်သောအပြောင်းအလဲအပြုအမူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအထူးပြုဖြစ်စေတဦးတည်းသာပေမယ့်လည်းတစ်ပြိုင်နက်တည်းဆုလာဘ်များနှင့် extraverted အပြုအမူများနိမ့်ဆုံးခုံရောက်ရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းအခြား variable ကို၏တန်ဖိုးကိုအထူးပြု။
ပုံ7။ ဆုလာဘ်များနှင့် extraverted အပြုအမူ၏ခံစားချက်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီမှုအတွက်တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးခုံမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုပြင်းအား (လက်ဝဲဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုး) နှင့် dopamine (DA) postsynaptic အဲဒီ receptor activation (အလျားလိုက်ဝင်ရိုး) အကြားတစ်ဦး Trade-off function ကိုအဖြစ်သရုပ်ဖော်ထားသည်။ ထိရောက်သော (သင်တန်းနည်းပြ) မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု၏ range DA activation ၏အဆင့်တစ် function ကိုအဖြစ်ညာဘက်ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးအပေါ်ရုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်။ (အသီးသီး A နှင့် B, တစ်ခုအဖြစ်အလျားလိုက်ဝင်ရိုးအပေါ်သတ်မှတ်ထားသော) အနိမ့်နှင့်မြင့်မားသောရို DA postsynaptic အဲဒီ receptor activation နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့တစ်ဦးချင်းစီအသီးသီးထိရောက်သောမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ (က) ကျဉ်းမြောင်းခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့် (ခ) ပ္ပံရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။
တစ်ဦးကတံခါးခုံမော်ဒယ် extraversion ၏သဘောသဘာဝ conceptualizing များအတွက်သက်ရောက်မှုရှိသည်သောအမူအကျင့်ဟောကိန်းများခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးက ရို DA postsynaptic အဲဒီ receptor activation ၏ရှုထောင်ပုံ၏အလျားလိုက်ဝင်ရိုးအပေါ်ကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပါတယ် 7, မတူကွဲပြားရိုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူနှစ်ဦးကိုတစ်ဦးချင်းစီသတ်မှတ်ထားသောရှိရာ: A (အနိမ့်ရိုအဆင့်) နှင့် B (အမြင့်ဆုံးရိုအဆင့်အထိ) ။ ထိုသူနှစ်ဦးမတူကွဲပြားတစ်ဦးချင်းစီ extraverted အပြုအမူများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှစ်ဦးစလုံးအပေါ် DA အဲဒီ receptor activation အတွက်ရိုကွဲပြားခြားနားမှုများ၏သက်ရောက်မှုသရုပျဖျောဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ပုံအဖြစ်ပထမဦးဆုံး7ညွှန်ပြဆိုပေးထားမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်, DA တုံ့ပြန်မှုများ၏ဒီဂရီပျမ်းမျှတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုကြီးပါလိမ့်မည် B vs. A။ DA လှုပ်ရှားမှု၏ degree ၏ပြင်းအားဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင့် အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ ကြောင်းသဘာဝကျကျမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းနေသည် [ဥပမာ, အကောင်းမြင်လိုသော, အလိုဆန္ဒလှုပ်ရှားမှုစိတ်အားထက်သန်မှုတိုးလာ], ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအတှေ့အကွုံမြားကိုလညျးပိုပြီးအတွက်တိုးမြှင့်ခံရဖို့ခန့်မှန်းနေသည် B vs. A.
ဒုတိယ, မက်လုံးပေး activation အတွက်ရိုကွဲပြားခြားနားမှုသည့်အပေါ်သက်ရောက်မှုမှတ်သားခဲ့ကြပေမည် အကွာအဝေး ထိရောက်သော (ဆိုလိုသည်မှာ reward- နှင့်အပြုအမူ-inducing) မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု၏။ ဒီအပုံထဲမှာသရုပ်ဖော်နေသည် 7အဘယ်မှာရှိညာဘက်ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးထိရောက်သော Affiliate လှုံ့ဆော်မှုများ၏အကွာအဝေးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ DA activation (အလျားလိုက်ဝင်ရိုး) ၏တိုးပွားလာရိုအဆင့်ဆင့်ထိရောက်သောမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတိုးပွားလာအကွာအဝေးနှင့်အတူ, အရှင်, အားနည်းမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုတိုးပွားလာထိရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နှင့်နေကြသည်။ ပုံထဲမှာ7တစ်ဦးချင်းစီ A နှင့် B အသီးသီးကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး vs ကျဉ်းရှိသည်။ တစ်ဦးချင်းစီအဘို့သိသိသာသာသည်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး B ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကြောင်းအကြံပြု B ပိုပြီးတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ် မကြာခဏဖြစ်သော ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအတှေ့အကွုံထုတ်ယူ။
တတိယအချက်မက်လုံးပေး sitmuli, တိရစ္ဆာန်သုတေသနမှတစ်ဦးချင်းစီ B ကိုတှေ့အကွုံမြားကို ပို. မကြာခဏနှင့်ပိုပြီးတိုးမြှင်ဆုလာဘ်လျှင်ထိုအတွေ့အကြုံ (ထို NAc အတွက် DA လွှတ်ရာအရေအတွက်နှင့်တစ်တန်းကြိမ်နှုန်းတိုးခြင်းနှင့် VTA DA အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏ကြာချိန်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအဖြူ, 1986; Nishino et al ။ , 1987; ဘလက်ဘန်း et al ။ , 1989; Schultz et al ။ , 1995) ။ ထို့ကြောင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် DA activation အတွက်အပြောင်းအလဲအတွေ့အကြုံရှိဆုလာဘ်တွေရဲ့အဆင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါမသာ, ဒါပေမယ့်လည်း (ဆုလာဘ်နှင့်အတူကြားနေလှုံ့ဆော်မှုကိုလင့်ထားသော DA-facilitated ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၏အစွမ်းသတ္တိအပြောင်းအလဲမှဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်Phillips က et al ။ , 2003; Simmons နှင့် Neill, 2009; Wassum et al ။ , 2011). ဤအ interaction က၏ရလဒ်ကိုတစ်ဦးချင်းစီခအတွက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဆုလာဘ်ချိတ်ဆက်ပိုပြီးပီပီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကွန်ယက်၏ဝယ်ယူဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်ထိုကဲ့သို့သောအဆိုပြုထောက်ခံသွားမှာပါ။
နောက်ဆုံးတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု extraversion အတွက်တစ်ဦးချင်းစီခြားနားချက်များ conditional မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများဝယ်ယူအတွက်အပြောင်းအလဲမြှင့်တင်ရန်သောအလွန်အချက်များဆက်စပ်ပေမည်။ အဆုံးစွန်သောအဆိုပါ encoded မှတ်ဉာဏ်၏အစွမ်းသတ္တိ, အနံအတွက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟု Network ကို အထွေထွေအခြေအနေတွင်နှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်တိကျတဲ့ features တွေကိုကိုယ်စားပြုကြောင်း conditional အပြုသဘောဆောင်တဲ့မက်လုံး (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး Contextual ensemble) ၏။ အဓိကအခင်းအကျင်း၏မှတ်ဉာဏ်ကိုယ်စားပြု၏ဆုလာဘ်-encoding ကထိုသို့သောကွဲပြားခြားနားမှု prefrontal cortical ဒေသများတွင်ပေါင်းစည်းအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ၏စစ်ဆင်ရေးမှတဆင့် extraverted အပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမှတ်သားနိုင်တယ်။ prefrontal ဒေသများမှာတော့ဆုလာဘ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဓိကအခြေအနေတွင်၏သင်္ကေတအလယ်ပိုင်းကိုယ်စားပြု (က) "reliving" နှင့်တစ်ဦးအဓိကအခြေအနေတွင်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကနေမျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းခြင်း, (ခ) ကိုလှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်နည်းလမ်းညွှန်တစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ် On-line ကိုကျင်းပရနိုင် ရည်မှန်းချက် (Goldman-Rakic, 1987; Waterhouse et al ။ , 1996; Damasio, 1999; Rolls, 2000) ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီ A နှင့် B ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းငှါ ကြောင့်အဓိကအခင်းအကျင်းနှင့်သူတို့၏မျှော်မှန်းရလဒ်၏ differential encoded အလယ်ပိုင်းကိုယ်စားပြုဖို့အချိန်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆုလာဘ်များနှင့် extraverted အပြုအမူကျော်လွယ်ကူချောမွေ့ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု (အများဆုံးဖွယ်ရှိ mOFC တှငျကငျြးပခဲ့ (Depue နှင့် Collins, 1999) ။ ကွဲပြားခြားနား ထား. , extraversion အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်စေခြင်းငှါ ထိန်းသိမ်းထား ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းမက်လုံးပေးအခင်းအကျင်း၏ differential encoded အလယ်ပိုင်းကိုယ်စားပြု၏ activation ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိလေ့လာမှုများ၏သက်ရောက်မှုအမူအကျင့်ပံ့ပိုးကူညီတဲ့အနိမ့်ခုံရှိသည်ဖို့ခန့်မှန်းထားသူ, မြင့်မားတဲ့အတွက် extraverts, ထိုဖြစ်ကြောင်း, ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေပါလိမ့်မယ်: (ဈ) ကိုပိုမို မကြာခဏဖြစ်သော မက်လုံးပေး၏ activation; (ii) တစ်ဦးတို့က ပိုမိုကျယ်ပြန် ကြောင်းအေးစက်အခင်းအကျင်း၏ကွန်ယက်ကို; (iii) ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ကြိုးဖြစ်ရပ်များနှင့်သူတို့၏မျှော်မှန်းရလဒ်များ၏ဗဟိုကိုယ်စားပြု encoded ထုတ်ယူ။
ဤလုပ်ငန်းကိုစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုကနေထောက်ပံ့ကြေး R01 MH 55347 (ရစ်ချတ်အေ Depue) ကထောက်ခံခဲ့သည်။
Aart, အီး, ဗန် Holstein, အမ်နှင့်အေးမြ R. (2011) ။ Striatal dopamine နဲ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုအကြား Interface ကို။ တပ်ဦး။ Psychol။ 2: 163 ။ Doi: 10.3389 / fpsyg.2011.00163
အလက်ဇန်းဒါး, G. အ, Crutcher, အမ်နှင့် DeLong, အမ် (1990) Basal ganglia-thalamocortical ဆားကစ်: မော်တာ, oculomotor "prefrontal" နှင့် "limbic" function များအတွက်အပြိုင်အလွှာဟာ။ prog ။ ဦးနှောက် Res။ 85, 283-315 ။
Amodio, DM နှင့် Frith, CF (2006) ။ စိတ်ထဲတွင်၏အစည်းအဝေး: အ medial တိုကျရိုကျ cortex နှင့်လူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှု နတ်။ ဗျာ neuroscience။ 7, 268-277 ။ Doi: 10.1038 / nrn1884
Anagnostaras, စင်ကာပူဒေါ်လာနှင့်ရော်ဘင်ဆင်, TE (1996) ။ စိတ်ကြွဆေး၏ psychomotor လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုထိခိုက်မခံတဲ့: ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအားဖြင့်မော်ဂျူ။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 110, 1397-1414 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.110.6.1397
Aoyama, တီ (1994) ။ (+) ၏ Pharmacokinetics နှင့် pharmacodynamics - hypersomnia နှင့်အတူလူနာအတွက် threo-methylphenidate enantiomer ။ Clin ။ Pharmacol ။ Ther။ 55, 270-276 ။ Doi: 10.1038 / clpt.1994.27
Baik, SH, Yoon, HS ကင်မ်, SE, နှင့်ကင်မ်, SH (2012) ။ Extraversion နှင့်လူငယ်လူကြီးများအတွက် striatal dopaminergic အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု: တစ်ဦး [သည့် F-18] ပေလေ့လာမှု fallypride ။ Neuroreport 23, 251–254. doi: 10.1097/WNR.0b013e3283507533
Berke, JD များနှင့် Hyman, SE (2000) ။ စွဲ, dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ 25, 515–532. doi: 10.1016/S0896-6273(00)81056-9
Berridge, KC (2004) ။ "ပျော်ရွှင်မှု, ထိခိုက်စေ unfelt နှင့်အဓိပ်ပါယျမရှိသောအလိုဆန္ဒ," အတွက် ခံစားချက်တွေကိုနှင့်စိတျလှုပျရှားမှု: အဆိုပါအမ်စတာဒမ်စာတမ်းဖတ်ပွဲ, eds Asr Manstead, N. Frijda နှင့်အေ Fischer (နယူးယောက်, NY: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း), 423-454 ။ Doi: 10.1017 / CBO9780511806582.015
Berridge, KC (2007) ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ over နှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှု - မက်လုံးမက်မက်မက်မောမှုအတွက်ကိစ္စ။ Psychopharmacology 191, 391–431. doi: 10.1007/s00213-006-0578-x
ဘလက်ဘန်း, JR, Phillips က, AG က, Jakubovic, အေနှင့် Fibiger, HC (1989) ။ Dopamine နှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်အပြုအမူ: II ကို။ တစ်ဦးက neurochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 103, 15-23 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.103.1.15
Breiter, N. , ရို, ခနှင့် Hyman, အက်စ် (1997) ။ ဦး နှောက်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူခြင်း။ သိပ္ပံ 278, 35-37 ။ Doi: 10.1126 / science.278.5335.35
Bromberg-မာတင်, ES, Matsumoto, အမ်နှင့် Hikosaka, O. (2010) ။ စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ် Dopamine: ဆုချီးဆန္ဒရှိနှင့်သတိပေးနခွေငျး။ အာရုံခံဆဲလျ 68, 815-834 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2010.11.022
Buckholtz, JW, Treadway, MT, Cowan, RL, Woodward, ND လီ, R. , အန်ဆာရီ, MS, et al ။ (2010) ။ လူ့ Impulse အတွက် Dopaminergic ကွန်ယက်ကိုကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ 329, 532 ။ Doi: 10.1126 / science.1185778
Cabib, အက်စ် (1993) ။ စိတ်ကြွဆေးမှ strain-မှီခိုအပြုအမူာင်း: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေ။ Pharmacol။ 4, 367-374 ။ Doi: 10.1097 / 00008877-199308000-00010
Canli, တီ, Sivers, အိပ်ချ်, Whitfield, SL, Gotlib, ih နှင့် Gabrieli, JD (2002) ။ extraversion တစ် function ကိုအဖြစ်ပျော်ရွှင်မျက်နှာများမှ Amygdala တုံ့ပြန်မှု။ သိပ္ပံ 296, 2191 ။ Doi: 10.1126 / science.1068749
Carr က, ဃ, နှင့် Sesack, အက်စ် (2000) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာဖို့ကြွက် prefrontal cortex ကနေ projections: mesoaccumbens နှင့် mesocortical အာရုံခံအတူ Synaptic အသင်းအဖွဲ့များအတွက်တိကျတဲ့ပစ်မှတ်ထား။ ဂျေ neuroscience။ 20, 3864-3873 ။
ဘုရားကျောင်း, AT (1994) ။ အဆိုပါ Tellegen နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတည်ဆောက်ပုံငါးခု-Factor မော်ဒယ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol။ 67, 898-909 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.67.5.898
ကော်စတာ, P. နှင့် McCrae, R. (1992) ။ Revised Neo ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Inventory (Neo-PI-R) နှင့် Neo ငါးခု-Factor Inventory (Neo-FFI) Professional ကလက်စွဲစာအုပ်။ Odessa, FL: စိတ်ဓာတ် Assessment အရင်းအမြစ်များ။
Damasio, AR (1999) ။ ဖွစျသှားအဘယ်အရာ၏ခံစားခကျြ: သိစိတ်ကို၏လုပ်ခြင်းအတွက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ Emotion။ နယူးယောက်, NY: Harcourt Inc က
D'Ardenn, K. , McClure, SM, Nystrom, LE နှင့် Cohen, JD (2008) ။ လူ့ ventral tegmental inရိယာ၌ dopaminergic အချက်ပြမှုများကိုထင်ဟပ် Bold တုံ့ပြန်မှု။ သိပ္ပံ 319, 1264-1267 ။ Doi: 10.1126 / science.1150605
နေ့, JJ, Roitman, MF, Wightman, RM, နှင့် Carelli, RM (2007) ။ Associative သင်ယူမှုအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine အချက်ပြအတွက်ပြောင်းလဲနေသောဆိုင်း mediates ။ နတ်။ neuroscience။ 10, 1020-1028 ။ Doi: 10.1038 / nn1923
Deckersbach, တီ, Miller က KK, Klibanski, အေ, Fischman, အေ, Dougherty, DD, Blais MA, et al ။ (2006) ။ ဒေသဆိုင်ရာနှောက်ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ် neuroticism နှင့် extraversion ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ စိတ်ကျရောဂါ။ စိုးရိမ်ခြင်း 23, 133-138 ။ Doi: 10.1002 / da.20152
Depue, RA (1995) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက် Neurobiological အချက်များ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pers။ 9, 413-439 ။ Doi: 10.1002 / per.2410090509
Depue, RA, နှင့် Collins, PF (1999) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏ Neurobiology: dopamine, မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပံ့ပိုးကူညီခြင်း, extraversion ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 22, 491-569 ။ Doi: 10.1017 / S0140525X99002046
Depue, RA, နှင့်ဖူ, Y. (2012) ။ "စိတ်ထားများ၏ neurobiology နှင့် neurochemistry" အတွက် စိတ်ထားများ၏လက်စွဲစာအုပ်, 456-510: အမ် Zentner (Guilford စာနယ်ဇင်းနယူးယောက်, နယူးယော့) ed ။
Depue, RA, Luciana, အမ်, Arbisi, P. , Collins, PF နှင့်လီယွန်, အေ (1994) ။ Dopamine နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ: အပြုသဘောစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှ agonist-သွေးဆောင် dopamine D2 လှုပ်ရှားမှုစပ်လျဉ်း။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol။ 67, 485-498 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.67.3.485
Depue, RA, နှင့် Morrone-Strupinsky, ဖက်စပ် (2005) ။ Affiliate ဘွန်း၏တစ်ဦးက neurobehavioral မော်ဒယ်: ဆက်နွယ်မှု၏လူသားတစ်ဦးရို conceptualizing များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 28, 313-395 ။ Doi: 10.1017 / S0140525X05000063
စိတ်ကျရောဂါ၏ Drevets, WC (2001) Neuroimaging နှင့် neuropahtological လေ့လာမှုများ: ခံစားချက်မမှန်၏သိမြင်မှု-စိတ်ခံစားမှု features တွေအဘို့အဂယက်ရိုက်။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol. 11, 240–249. doi: 10.1016/S0959-4388(00)00203-8
Devilbiss, DM နှင့် Berridge, CW (2008) ။ methylphenidate ၏သိမှတ်ခံစားမှု-တိုးမြှင့်ဆေးများဦးစား prefrontal cortex အာရုံခံတုန့်ပြန်တိုးမြှင့်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 64, 626-635 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2008.04.037
Elliott သည်, R. , Newman က, JL, Long, oa နှင့် Deaking, JFW (2003) ။ လူသားတွေအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဆုလာဘ်ပေးရန် striatum နှင့် orbitofrontal cortex အတွက် differential တုံ့ပြန်မှုပုံစံများ: တစ် parametric အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ ဂျေ neuroscience။ 23, 303-307 ။
Everitt, BJ, Dickinson, အေနှင့် Robbins, TW (2001) ။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူ၏ neuropsychological အခြေခံ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ. 36, 129–138. doi: 10.1016/S0165-0173(01)00088-1
fields, HL, Hjelmstad, GO, Margolis, eb နှင့် Nicola, SM (2007) ။ သင်ယူစာစားချင်စိတ်ကိုအမူအကျင့်များနှင့်အပြုသဘောအားကောင်းအတွက် Ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron ။ Annu ။ ဗျာ neuroscience။ 30, 289-316 ။ Doi: 10.1146 / annurev.neuro.30.051606.094341
သွပ်ရည်စိမ်, အေ, Hare, TA, Davidson, အမ်, ဂျူလီ Spicer, ဂျေ, ဂယ်ရီဂလိုဗာ, G. အများနှင့်ကက်ဆေး, BJ (2005) ။ လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှုအတွက် ventral frontostriatal circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေ neuroscience။ 25, 8650-8656 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2431-05.2005
Goldman-Rakic, PS (1987) ။ "ဟုအဆိုပါ prefrontal cortex ၏ Circuitry နှင့်ကိုယ်စားပြုမှတ်ဉာဏ်အားဖြင့်အပြုအမူများ၏စည်းမျဉ်း," အတွက် ဇီဝကမ္မဗေဒ၏လက်စွဲစာအုပ်, ed ။ V. Mountcastle (အမေရိကန်ဇီဝ Society က) ။
Gottfried, JA, O'Doherty, J. နှင့် Dolan, RJ (2003) ။ လူ့ amygdala နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ်တန်ဖိုး encoding ။ သိပ္ပံ 301, 1104-1107 ။ Doi: 10.1126 / science.1087919
goto, Y. နှင့်တော်ကကျေးဇူး, AA ကို (2005) ။ နျူကလိယ၏ limbic နှင့် cortical drive ကို၏ Dopaminergic မော်ဂျူရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် accumbens ။ နတ်။ neuroscience။ 6, 805-812 ။ Doi: 10.1038 / nn1471
မီးခိုးရောင်ဂျေအေ (1994) ။ "ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတိုင်းအတာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစနစ်များ," တွင် Emotion ၏သဘာဝ: အခြေခံမေးခွန်းများ, eds P. Ekman နှင့် RJ Davidson (နယူးယောက်, NY: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း), 329-331 ။
မီးခိုးရောင်, JR နှင့် Braver, TS (2002) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတွက် caudal anterior cingulate cortex တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်-မှတ်ဉာဏ်-related activation ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ပြုမူနေ။ neuroscience။ 2, 64-75 ။ Doi: 10.3758 / CABN.2.1.64
Graybiel, အေ (1998) ။ အရေးယူ repertoire ၏ Basal ganglia နှင့် Chunk ။ Neurobiol ။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 70, 119-136 ။ Doi: 10.1006 / nlme.1998.3843
Groenewegen, အိပ်ချ်, Mulder, AB, Beijer, AVJ, Wright, CI, Lopes da Silva သည်အက်ဖ်နှင့် Pennartz, CMA (1999a) ။ Hippocampal နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် amygdaloid interaction က။ Psychobiology 27, 149-164 ။
Groenewegen, အိပ်ချ်, Wright, C တို့, Beijer, အေနှင့် Voorn, P. (1999b) ။ ventral striatal သွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များ၏ convergence နဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 877, 49-63 ။ Doi: 10.1111 / j.1749-6632.1999.tb09260.x
Haber, SN နှင့် Knutson, ခ (2010) ။ အကျိုးကိုဆားကစ်: မျောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်လူ့ပုံရိပ်ချိတ်ဆက်။ Neuropsychopharmacology 35, 4-26 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.129
ဟော်လန်, P. (1992) ။ "Pavlovian အေးစက်အတွက် setting အခါသမယ" အတွက် သင်ယူပြီးတက်ကြွတဲ့၏စိတ်ပညာ, Vol ။ , 28-69: 125, ဃ Medin (Academic စာနယ်ဇင်း San Diego မှ,, CA) ed ။ Doi: 10.1016 / S0079-7421 (08) 60488-0
ချိတ်, အမ်, ဂျုံးစ်, G. အ, Neill, ဃ, နှင့်တရားမျှတမှု, ဂျေ (1992) ။ စိတ်ကြွဆေးာင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: ထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှု။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ။ 41, 203-210 ။ Doi: 10.1016 / 0091-3057 (92) 90083-R ကို
Hyman, SE, နှင့် Malenka, RC (2001) ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်: အမလှူ၏ neurobiology နှင့်၎င်း၏ဇွဲ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience။ 2, 695-703 ။ Doi: 10.1038 / 35094560
Jodogne, C တို့, Marinelli, CM, Le Moal, အမ်နှင့် Piazza, PV (1994) ။ စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ predisposed တိရစ္ဆာန်များစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် hyperlocomotion အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဦးစလုံး၏ Contextual အေးစက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုမိုမြင့်မားလွယ်ကူစွာထိခိုက်ပြသပါ။ ဦးနှောက် Res. 657, 236–244. doi: 10.1016/0006-8993(94)90973-3
Jung, C. (1921) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးအစားများ။ နယူးယောက်, NY: Harcourt, Brace ။
Kauer, ဂျာနှင့် Malenka, RC (2007) ။ Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း။ နတ်။ ဗျာ neuroscience။ 8, 844-858 ။ Doi: 10.1038 / nrn2234
Knutson, ခနှင့် Cooper က, JC (2005) ။ ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ Curr ။ Opin ။ Neurol။ 18, 411-417 ။ Doi: 10.1097 / 01.wco.0000173463.24758.f6
Koek, ဒဗလျူနှင့် Colpaert, အက်ဖ် (1993) ။ ကြွက်များတွင် methyphenidate-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေ၏တားစီး။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther။ 267, 181-191 ။
Krauss, အက်စ်အက်စ်, Depue, RA, Arbisi, P. နှင့် Spoont, အမ် (1992) ။ ရာသီအလိုက်ကိုထိခိုက်ရောဂါအတွက်အမူအကျင့်မတည်ငြိမ်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res။ 43, 147-156 ။ Doi: 10.1016 / 0165-1781 (92) 90129-မေး
Kumari, V. , Ffytche, DH, ဝီလျံ, SC နှင့် Grey ကဂျေအေ (2004) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသိမြင်တောင်းဆိုချက်များမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဂျေ neuroscience။ 24, 10636-10641 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3206-04.2004
သည် Le Moal, အမ်, ရှိမုနျ, အိပ်ချ် (1991) ။ Mesocorticolimbic dopaminergic ကွန်ယက်ကို: functional ဖြစ်စေခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းအခန်းကဏ္ဍ။ Physiol ။ ဗြာ။ 71, 155-234 ။
Little က, K. , Fry, R. နှင့် Watson, ဃ (1993) ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာကိုကင်း-အထိခိုက်မခံ DA နှင့် 5HT လွှာမှက်ဘ်ဆိုက်များမှ binding ။ ဂျေ Neurochem။ 61, 1996-2006 ။ Doi: 10.1111 / j.1471-4159.1993.tb07435.x
Loranger, အေ (1994) ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါစာမေးပွဲ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 51, 215-224 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.1994.03950030051005
Luciana, အမ်နှင့် Collins, P. (1997) ။ သာမန်လူသားတွေအတွက်တွေကိုကန့်ကွက် Spatial သော်လည်းမများအတွက်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏ Dopaminergic မော်ဂျူ။ ဂျေ Cogn ။ neuroscience။ 9, 330-347 ။ Doi: 10.1162 / jocn.1997.9.3.330
Luciana, အမ်, Collins, PF နှင့် Depue, RA (1998) ။ လူ့ Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏မော်ဂျူအတွက် dopamine နှင့် serotonin များအတွက်အခန်းကဏ္ဍဆန့်ကျင်။ Cereb ။ cortex 8, 218-226 ။ Doi: 10.1093 / cercor / 8.3.218
Luciana, အမ်, Depue, RA, Arbisi, P. နှင့်လီယွန်, အေ (1992) ။ တစ်ဦး D2 dopamine အဲဒီ receptor agonist အားဖြင့်လူသားတွေအတွက်မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်၏နည်းပြ။ ဂျေ Cogn ။ neuroscience။ 4, 58-68 ။ Doi: 10.1162 / jocn.1992.4.1.58
McNab, အက်ဖ်, Varrone, အေ, Farde, အယ်လ်, Bystritsky, AP, Forssberg, အိပ်ချ်, နှင့် Klingberg, တီ (2009) ။ cortical dopamine D1 အဲဒီ receptor အတွက်အပြောင်းအလဲများသိမြင်မှုလေ့ကျင့်ရေးနှင့်ဆက်စပ် binding ။ သိပ္ပံ 323, 800-802 ။ Doi: 10.1126 / science.1166102
Mirenowicz, ဂျေနှင့် Schultz, ဒဗလျူ (1996) အစာစားချင်စိတ်များက midbrain dopamine အာရုံခံ၏ဦးစားပေး activation ထက်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု။ သဘာဝ 379, 449-451 ။ Doi: 10.1038 / 379449a0
Mobbs, ဃ, Hagan, CC ကို, Azim, အီး, Menon, V. နှင့် Reiss, AL (2005) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆုလာဘ်များနှင့်ဟာသနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ခံစားမှုဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 102, 16502-16506 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0408457102
မွန်တဂူ, PR စနစ်, Hyman, SE, နှင့် Cohen ကို, JD (2004) ။ အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် dopamine ဘို့တွက်ချက်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ 431, 760-767 ။ Doi: 10.1038 / nature03015
Morrone, ဖက်စပ်, Depue, RA, Scherer, AJ နှင့်အဖြူရောင်, TL (2000) ။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်-သွေးဆောင်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့် extraversion ၏အေးဂျင့်များနှင့် Affiliate အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပတ်သက်. အပြုသဘော activation ။ Pers ။ Individ ။ Dif. 29, 199–216. doi: 10.1016/S0191-8869(99)00187-7
Morrone-Strupinsky, ဖက်စပ်နှင့် Depue, RA (2004) ။ Affiliate နှင့်အေးဂျင့် extraversion နှစ်ခုကွဲပြား, ရုပ်ရှင်-သွေးဆောင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ် differential စပ်လျဉ်း။ Pers ။ Individ ။ Dif။ 30, 71-86 ။
et al Myer-Lindenberg, အေ, Kohn, PD, Koachana, ခ, Kippenhan, အက်စ်, McInerney-လီယို, အေ, Nussbaum, R. ။ (2005) ။ လူသားတွေအတွက် Midbrain dopamine နဲ့ prefrontal function ကို: အပြန်အလှန်နှင့်မော်ဂျူနေဖြင့် COMT genotype ။ နတ်။ neuroscience။ 8, 594-596 ။ Doi: 10.1038 / nn1438
Nestler, အီး (2001) ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience။ 2, 119-128 ။ Doi: 10.1038 / 35053570
Nishino, အိပ်ချ်, Taketoshi, O. , Muramoto, K. , ဖူကူ, အမ်နှင့် Sasaki, K. (1987) ။ မျောက်အတွက်နို့တိုက်ကျွေးမှုလှုံ့ဆော်မှုဘားစာနယ်ဇင်းစဉ်အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ ဦးနှောက် Res. 413, 302–313. doi: 10.1016/0006-8993(87)91021-3
Oades, RD နှင့် Halliday, GM က (1987) ။ Ventral tegmental (A10) စနစ်: neurobiology ။ 1 ။ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ. 2, 117–165. doi: 10.1016/0165-0173(87)90011-7
O'Donnell, P. (1999) ။ နျူကလိယအတွက် Ensemble coding accumbens ။ Psychobiology 27, 187-197 ။
Olson, VG, Zabetian, က CP, Bolanos,, CA, Edwards က, အက်စ်, Barrot, အမ်, Eisch, AJ, et al ။ (2005) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှစ်ခု function ကွဲပြားငျဒသေအဘို့သက်သေအထောက်အထား: Camp တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်းများကမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ ဂျေ neuroscience။ 25, 5553-5562 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.0345-05.2005
ပါကင်, ဂျာ Olmstead, MC, ဘန်း, LH, Robbins, TW နှင့် Everitt, BJ (1999) ။ ယင်းနျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများအတွက် Dissociation စာစားချင်စိတ်ကို pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူနဲ့ D-စိတ်ကြွဆေးများက conditional အားဖြည့်ခြင်းနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုအလားအလာအပေါ် core နဲ့ shell ကို accumbens ။ ဂျေ neuroscience။ 19, 2401-2421 ။
Phillips က, AG က, Ahn, အက်စ်နှင့်လင်းမြို့တွင်, JG (2003) ။ အဆိုပါ mesocorticolimbic dopamine စနစ်၏ Amygdalar ထိန်းချုပ်မှု: လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူဖို့အပြိုင်လမ်းကြောင်း။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ။ 27, 543-554 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2003.09.002
Ranaldi, R. , Pocock, ဃ, Zereik, R. နှင့်ပညာရှိ, RA (1999) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် Dopamine အတက်အကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, မျိုးသုဉ်းခြင်း, သွေးကြောသွင်း D-စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေး reinstatement စဉ်အတွင်း accumbens ။ ဂျေ neuroscience။ 19, 4102-4115 ။
Ritz, အမ်, Bilford, G. အများနှင့် Katz, အမ် (1987) ။ DA ပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ကိုကင်း receptors ကင်း၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်။ သိပ္ပံ 237, 1219-1223 ။ Doi: 10.1126 / science.2820058
Reuters, အမ်နှင့် Hennig, ဂျေ (2005) ။ extraversion ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ catechol-O-methyltransferase VAL158MET polymorphic ၏အသင်းမှ။ Neuroreport 16, 1135–1138. doi: 10.1097/00001756-200507130-00020
Reuter, အမ်, Schmitz, အေ, Corr, P. နှင့် Hennig, ဂျေ (2006) ။ မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇသည် Gray ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသီအိုရီကိုထောက်ခံသည်။ COMT နှင့် DRD2 polymorphic များ၏အပြန်အလှန်အပြုအမူဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုစနစ်ကိုခန့်မှန်းသည်။ int ။ ဂျေ Neuropsychopharmacol။ 9, 155-166 ။ Doi: 10.1017 / S1461145705005419
ရော်ဘင်ဆင်, TE နှင့် Berridge, KC (2000) ။ စွဲလမ်းမှု၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive အမြင်။ စှဲမွဲမှု 95 (ပျော့ပျောင်း။ 2), S91-S117 ။
Rolls, ET (2000) ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex နဲ့ဆုလာဘ်။ Cereb ။ cortex 10, 284-294 ။ Doi: 10.1093 / cercor / bhj120
Schroeder, အက်ဖ်အေ, Penta, KL, Matevossian, အေ, ဂျုံးစ်, SR, et al Konradi, C တို့, Tapper, AR ။ (2008) ။ ဆုလာဘ် circuitry အတွက်အတန်းအစားငါ / II ကို histone deacetylase Indicator chromatin အသစ်ပြန်ပြုပြင်၏ dopamine D1 အဲဒီ receptor အချက်ပြခြင်းနှင့်တားစီး၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် activation နှင့်ကိုကင်း-related အပြုအမူတွေ modulate ။ Neuropsychopharmacology 33, 2981-2992 ။ Doi: 10.1038 / npp.2008.15
Schultz, ဒဗလျူ (2007) ။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာအကွိမျမြားစှာ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ Annu ။ ဗျာ neuroscience။ 30, 259-288 ။ Doi: 10.1146 / annurev.neuro.28.061604.135722
Schultz, ဒဗလျူ, Apicella, P. , Romo, R. နှင့် Scarnati, အီး (1995) ။ "အတိတ်နှင့်အနာဂတ်အပြုအမူဖြစ်ရပ်များထင်ဟပ်မျောက် striatum အတွက် context-မှီခိုလှုပ်ရှားမှု" အတွက် အဆိုပါ Basal Ganglia အတွက်ပြန်ကြားရေးထုတ်ယူခြင်း၏မော်ဒယ်များ, eds ဂျေ Houk, JJ Davis ကများနှင့်ဃ Beiser (ကိန်းဘရစ်, MA: MIT ကစာနယ်ဇင်း), 216-229 ။
Schultz, ဒဗလျူ, Bayan, P. နှင့်ဂူ, PR စနစ် (1997) ။ ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ 275, 1593-1595 ။ Doi: 10.1126 / science.275.5306.1593
Sesack, SR နှင့်တော်ကကျေးဇူး, AA ကို (2010) ။ Cortico-Basal ganglia ဆုလာဘ်ကွန်ယက်ကို: microcircuitry ။ Neuropsychopharmacology 35, 27-47 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.93
Shen, ဒဗလျူ, Flajolet, အမ်, Greengard, P. နှင့် Surmeier, DJ သမား (2008) ။ striatal Synaptic plasticity ၏ Dichotomous dopaminergic ထိန်းချုပ်မှု။ သိပ္ပံ 321, 848-851 ။ Doi: 10.1126 / science.1160575
Simmons, DA နှင့် Neill, DB (2009) ။ အဆိုပါ basolateral amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens အကြား functional အပြန်အလှန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်အကျိုးသည်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုအခြေခံ။ neuroscience 159, 1264-1273 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2009.01.026
Simmons, JM, Ravel, အက်စ်, Shidara, အမ်နှင့် Richmond, BJ (2007) ။ မျောက် orbitofrontal cortex နဲ့ ventral striatum အတွက်ဆုလာဘ်-ဆက်ပြောပါတယ်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1121, 376-394 ။ Doi: 10.1196 / annals.1401.028
Smillie, ld, Cooper က, AJ, Proitsi, P. , Powell, JF နှင့်ကောက်ယူသူ, အေဒီ (2009) ။ DRD2 dopamine မျိုးရိုးဗီဇအတွက်အပြောင်းအလဲ Extraverted ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးခန့်မှန်းထားပါတယ်။ neuroscience ။ လက်တ။ 468, 234-237 ။ Doi: 10.1016 / j.neulet.2009.10.095
Smillie, ld, Cooper က, AJ, အလိုရှိဂျေနှင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်း, ဒဗလျူ (2012) ။ အဆိုပါခေါပိုပေါက်ကွဲသံကြီး extraverts get သလား? extraversion ၏အကျိုးသက်ရောက်စေ-reactivity ကိုယူဆချက်သနျ့စ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol။ 103, 306-326 ။ Doi: 10.1037 / a0028372
ထူးဆန်းတဲ့, P. (1993) Dopamine အဲဒီ receptor: ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို။ prog ။ ဦးနှောက် Res။ 99, 167-179 ။ Doi: 10.1016 / S0079-6123 (08) 61345-X ကို
Stricker, အီးများနှင့် Zigmond, အမ် (1986) ။ "ဦးနှောက် monoamines, homeostasis နှင့်သပ္ပါယ်အပြုအမူ," အတွက် အမေရိကန်ဇီဝလူ့အဖွဲ့အစည်း, ဇီဝကမ္မဗေဒ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ပုဒ်မ 1 ။ အာရုံကြောစနစ်။ vol ။ IV ။ အဆိုပါဦးနှောက်၏အခ်ါစည်းမျဉ်းစနစ်များ, 677-700: ဂျေ Mountcastle (အမေရိကန်ဇီဝ Society က Bethesda, MD) ed ။
Stuber, GD, Klanker, အမ်, Ridder, bd, Bower, MS, Joosten RN, Feenstra, MG, et al ။ (2008) ။ ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကို midbrain dopamine အာရုံခံပေါ်သို့ excitatory Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုမြှင့်တင်ရန်။ သိပ္ပံ 321, 1690-1692 ။ Doi: 10.1126 / science.1160873
Taber, အမ်, Das, အက်စ်နှင့် Fibiger, HJ (1995) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာကနေတဆင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေ: subcortical dopamine လွှတ်ပေးရေး cortical စည်းမျဉ်း။ Neurochemistry 65, 1407-1410 ။
Tellegen, အေ, Lykken, ၎င်းကို, Bouchard က, တီဂျေ, Wilcox, KJ, Segal, NL နှင့် Rich, အက်စ် (1988) ။ အမွှာအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတူဆိတ်ကွယ်ရာနှင့်အတူတူမွေး။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol။ 54, 1031-1039 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.54.6.1031
Tellegen, အေနှင့် Waller, Ng (2008) ။ "စမ်းသပ်ဆောက်လုပ်ရေးမှတဆင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Exploring: အ multidimensional ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမေးခွန်းလွှာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု," တွင် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း၏ Sage လက်စွဲစာအုပ်, eds GJ Boyle, G. အ Matthews နှင့် DH Saklofske (လန်ဒန်: Sage), 161-292 ။
Vassout, အေ, စမစ်, ဃ, Roger, အက်ဖ်နှင့် Brent, အယ်လ် (1993) ။ bupropion အားဖြင့် DA receptors ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: စိတ်မကျဆေး Antidepressants နှင့် CNS စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ ဂျေ Reception ။ res။ 13, 341-354 ။
Volkow, N. , ဝမ်, G. အ, Fischman, အမ်, Foltin, R. , မုဆိုး, ဂျေနှင့် Abumrad, N. (1995) ။ ကိုကင်းနှင့်တူ methylphenidate လား? Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 52, 456-463 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.1995.03950180042006
Volkow, N. , ဝမ်, G. အ, Fischman, အမ်, Foltin, R. , မုဆိုး, ဂျေ, Abumrad, N. , et al ။ (1997) ။ ကိုကင်းနှင့်အ dopamine Transporter ထေို၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ သဘာဝ 386, 827-829 ။ Doi: 10.1038 / 386827a0
Volkow, N. , ဝမ်, G. အ, Fischman, အမ်, Foltin, R. , မုဆိုး, ဂျေ, Abumrad, N. , et al ။ (1998) ။ ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အသက်အရွယ်နှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်မော်တာချို့ယွင်းနှင့်အတူဦးနှောက် dopamine လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကျဆင်းမှုအကြားအသင်းမှ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 155, 344-349 ။
Volkow, N. , ဝမ်, G. အ, Fischman, အမ်, Foltin, R. , မုဆိုး, ဂျေ, Abumrad, N. , et al ။ (2001) ။ ပါးစပ် methylphenidate ၏ကုထုံးဆေးများသိသိသာသာလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ extracellular dopamine တိုးမြှင့်။ ဂျေ neuroscience။ 21, 1-5 ။
Wacker, ဂျေ, Chavanon, M.-L. နှင့် Stemmler, G. အ (2006) ။ လူသားတွေအတွက် extraversion ၏ dopaminergic အခြေခံစုံစမ်းစစ်ဆေး: တစ် multilevel ချဉ်းကပ်။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol။ 91, 171-187 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.91.1.171
Wacker, ဂျေ, Mueller, EM, Hennig, ဂျေနှင့် Stemmler, G. အ (2012) ။ neurogenetic သုတေသနအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ phenotypes defining နှင့်တိုင်းတာအပေါ်: အ catechol-O-methyltransferase (COMT) မျိုးဗီဇမှ extraversion နှင့်ထောက်လှမ်းရေးတသမတ်တည်းလင့်ထားသည်လုပ်နည်း။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol။ 103, 213-227 ။ Doi: 10.1037 / a0026544
Wacker, ဂျေ, Mueller, EM, Pizzagalli, DA, Hennig, ဂျေနှင့် Stemmler, G. အ (2013) ။ Dopamine-D2-receptor ပိတ်ဆို့တစ်ခုချဉ်းကပ်-လှုံ့ဆျောမှုအခြေအနေတွင်ရိုချဉ်းကပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တိုကျရိုကျ asymmetry အကြားအသင်းအဖွဲ့နောက်ကြောင်းပြန်။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ Doi: 10.1177 / 0956797612458935 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] ။
ဝမ်, G. အ, Volkow, N. , ဝမ်, G. အ, Fischman, အမ်, Foltin, R. နှင့်မုဆိုး, ဂျေ (1994) ။ Methylphenidate သာမန်လူ့ဘာသာရပ်များအတွက်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Pharmacol ။ လက်တ။ 54, 143-146 ။
Wassum, KM, Ostlund, SB, Balleine, BW နှင့် Maidment, NT (2011) ။ dopamine အချက်ပြအပေါ် Pavlovian မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆာပမက်လုံးပေးသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များ၏ differential မှီခို။ လေ့လာပါ။ Mem ကို။ 18, 475-83 ။ Doi: 10.1101 / lm.2229311
Waterhouse, အယ်လ်, Fein, ဃ, နှင့် Modahl, C. (1996) ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက် Neurofunctional ယန္တရားများ။ Psychol ။ ဗြာ။ 103, 457-489 ။
Watson, ဃ, နှင့် Clark က, LA က (1997) ။ "Extraversion" အတွက် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်, 767-793: အယ်လ် Pervin (Academic စာနယ်ဇင်းနယူးယောက်, နယူးယော့) ed ။
Watson, ဃ, Clark က, LA ကများနှင့် Tellegen, အေ (1988) ။ အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာ၏အကျဉ်းအစီအမံများဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် validation ကိုထိခိုက်စေ: အ PANAS အကြေး။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol။ 54, 1063-1070 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.54.6.1063
Watson, ဃ, နှင့် Tellegen, အေ (1985) ။ ခံစားချက်တစ်ခုကြည်ကြည်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဆီသို့ဦးတည်။ Psychol ။ နွားလား။ 98, 219-235 ။ Doi: 10.1037 / 0033-2909.98.2.219
Weiner, ဂျေ (1972) ။ "မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် CNS စိတ်ကြွဆေး၏ဆေးဝါးဗေဒ," အတွက် နိုင်ငံတကာညီလာခံ၏တရားစွဲဆိုမှု(; Lea နှင့် Febiger Philadelphia တွင်, PA), 243-251, C. Zarafonetis ed ။
အဖြူ, N. (1986) ။ စားသောက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: dopaminergic nigrostriatal အာရုံခံခြင်းဖြင့် sensorimotor function ကိုထိန်းချုပ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 10, 15–36. doi: 10.1016/0149-7634(86)90030-8
Zald, ဃ, Cowan, RL, Riccardi, P. , Baldwin, RM, အန်ဆာရီ, အမ်လီ, R. , et al ။ (2008) ။ Midbrain dopamine အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုပြောင်းပြန်လူသားတွေအတွက်အသစ်အဆန်း-ရှာစရိုက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဂျေ neuroscience။ 28, 14372-14378 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2423-08.2008
Zellner, MR နှင့် Ranaldi, R. (2010) ။ ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုတစ်အဆိုပြုထား neurobiological အစိတ်အပိုင်း: ဘယ်လို conditional လှုံ့ဆော်မှု VTA dopamine ဆဲလ်တွေကိုသက်ဝင်စေဖို့စွမ်းရည်ကိုဆည်းပူး။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ။ 34, 769-80 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2009.11.011
Zevon, အမ်နှင့် Tellegen, အေ (1982) ။ ခံစားချက်ပြောင်းလဲမှု၏ဖွဲ့စည်းပုံ: တစ်ခု idiographic / nomothetic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol။ 43, 111-122 ။ Doi: 10.1037 / 0022-3514.43.1.111
Zuckerman, အမ် (2002) ။ "Zuckerman-Kuhlman ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမေးခွန်းလွှာ (ZKPQ): တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာငါး factorial မော်ဒယ်," အတွက် Big ငါးခုအကဲဖြတ်, eds ခ De Raad နှင့်အမ် Perugini (Göttingen: Hogrefe နှင့် Huber), 377-396 ။
keywords: dopamine, extraversion, အေးစက်, သိမှတ်ခံစားမှု, မော်တာအလျင်, အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေ
ကိုးကား: Depue RA နှင့်ဖူ Y ကို (2013) extraversion ၏သဘောသဘာဝတွင်: dopamine-facilitated ထိခိုက်စေ၏ conditional Contextual activation အတွက်အပြောင်းအလဲ, သိမြင်မှုနှင့်မော်တာဖြစ်စဉ်များ။ တပ်ဦး။ Hum ။ neuroscience. 7: 288 ။ Doi: 10.3389 / fnhum.2013.00288
Received: 30 မတ်လ 2013; စက္ကူဆိုင်းငံ့ထုတ်ဝေ: 19 ဧပြီလ 2013;
လက်ခံခဲ့သည်: 02 ဇွန်လ 2013; အွန်လိုင်း Published: 13 ဇွန်လ 2013 ။
ဇန်နဝါရီ Wacker, Philippe-Universität Marburg, ဂျာမနီ
ချားလ်စ်အက်စ် Carverတက္ကသိုလ်မိုင်ယာမီ, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏
လုကာဃ Smillieမဲလ်ဘုန်း, သြစတြေးလျ၏, တက္ကသိုလ်
Juergen Hennig, ယုတ္တု-Liebig-တက္ကသိုလ် Giessen, ဂျာမနီ
မူပိုင်ခွင့် 2013 Depue နှင့်ဖူ©။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open-access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်အခြားဖိုရမ်များအတွက်အသုံးပြုခြင်း, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မျိုးပွားခွင့်ပြုထားတဲ့, မူရင်းစာရေးဆရာများနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စသည်တို့ကိုမဆို Third-party ဂရပ်ဖစ်ကိုရည်မှတ်မဆိုမူပိုင်သတိပေးချက်များမှဘာသာရပ်နေကြသည်ပေးအပ်
* ပေးစာယူ: ရစ်ချတ်အေ Depue, လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေး, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ Neurobiology ၏ဓာတ်ခွဲခန်း, 243 MVR ခန်းမ, ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်, Ithaca, နယူးယော့ 14853, အမေရိကန်နိုင်ငံက e-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]